လွမ်းလိမ့်မည် လို့ မတွေးခဲ့မိဘူး – Grab Love Story
ကျောင်းသာ ပြီး သွားတယ် .. ဇာတိရွာ ကလေး ဆီ မပြန်ဖြစ်ဘူး ။ ကျွန်တော် ကို မန်းလေး မှာ တိုက်ခန်း တစ်ခု ငှားထားပေးတယ် ။ သုံးထပ် အပေါ်ဆုံး တိုက်ခန်းလေး ။ အိပ်ခန်း နှစ်ခန်းပါတယ် ။ အရှေ့ဘက် မှာတော့ ဧည်းခန်း ပေါ့ ။ အနောက် မှာ ရေချိုးခန်း တစ်ခု ၊ အိမ်သာ တစ်ခု နဲ့ မီးဖိုချောင် တစ်ခုပါတယ် ။
ကျောင်းတက် ကတည်း က ချစ်ခဲ့ တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရှိတယ် ။ သူ့ နာမည် က မီမို ။ အရမ်း လှ တဲ့ အထဲ ကတော့ မဟုတ်ပေမယ့် သိပ်ချစ်စရာကောင်းတယ် ( ကျွန်တော့် အမြင်ပေါ့ ) ။
ကျောင်း တက်ရင်း သူ့ ကိုရည်းစား စကား နှစ်ခါ ပြောဖို့ ကြိုးစားကြည့်တယ် ။ သူ လက်မခံခဲ့ဘူး ။ သူ က ကျွန်တော့် ထက် ၁ နှစ်ကြီးတယ် ။ သူ့ နဲ့ ကျွန်တော့် ကြားမှာ ခြားနားချက် များပြီး ဖြစ်နိုင်ချေ က အရမ်းနည်းတယ် ။ အဲဒါ ကို သူလည်း သိတယ် .. ကျွန်တော် လည်း သိတယ် .. နှလုံးသား က စေခိုင်းတော့ လည်း ကြိုးစား မိခဲ့တယ် . . . ရည်းစား စကားပြောခွင့် မရခဲ့ပေမယ့် အရင်းနှီး ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ . .
ကျွန်တော် ရယ် မီမို ရယ် နောက် သူငယ်ချင်းကောင်လေး တစ်ယောက်ရယ် သုံးယောက် ရန်ကုန် ကို (၁) ပတ် သင်တန်း တက်ဖို့ ရောက်လာခဲ့တယ် ။ သူ တစ်ယောက်တည်း တစ်ခန်း ၊ ကျွန်တော် တို့ ယောင်္ကျားလေး နှစ်ယောက် က တစ်ခန်း ဟိုတယ် မှာ တည်း ခဲ့တယ် ။ သင်တန်း တက်လိုက် လျှောက် လည် လိုက် နဲ့ ပျော်ခဲ့တာပေါ့ ။ သင်တန်း ပြီးတော့ မီမို ရယ် ကျွန်တော် နှစ်ယောက် က မန်းလေး ပြန်မယ် ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်း က သူ ရန်ကုန် မှာ နေအုံးမယ် ဆိုပြီး ကျန်ခဲ့တယ် ။ အဲဒီ နောက် ကျွန်တော် တို့ ယောင်္ကျားလေး နှစ်ယောက်ခန်း ကို ပြန်အပ် ၊ မီမို အခန်း ကို သူငယ်ချင်း နာမည် နဲ့ ချိန်းပြီး ကျွန်တော် တို့ ပစ္စည်းတွေ ကို . . သူ့ အခန်း ထဲ ပေါင်းထည့် ထားလိုက်တယ် ။ ကျွန်တော့် တို့ နှစ်ယောက် ည နေ ကျ တော့ အခန်းပြန်နား .. မန်းလေး ပြန်ဖို့ ပြင်ကြတာပေါ့ . . အဲဒီ မှာ စ တွေ့တာပဲ ။ တစ်ယောက် တစ်လှည့် ရေချိုးခန်း ဝင်တယ် . .
ကျွန်တော် အရင်ချိုးတယ် .. ပြီးတော့ သူချိုးတယ် .. ကျွန်တော် ချိုးပြီးတော့ ကုတင်မှာ နားနေခဲ့တယ် ။ သူ က အဝတ်လဲ ပြီး တစ်ဘက်သုတ်ရင် ကျွန်တော့် ဘေး မှာ လာ လဲ နေတယ် ။ တစ်ယောက်ခန်း ဆိုတော့ ထိုင်ခုံ က မရှိခဲ့ဘူးလေ . . စိတ်ရဲ့ ရင်ခုန်မှု ကို ကျွန်တော် ဘယ်လို မှ မထိန်းချုပ် နိုင်ခဲ့ ဘူး . . သူ့ ဆံပင် သင်းရနံလေး တွေ လူ ကို တွယ်ငြိ စေခဲ့တယ် . . . သူ ဆံပင်လေး တွေ ကို လက်လေး နဲ့ ဖြည်းဖြည်း ထိုး ဖွနေမိခဲ့တယ် ..ဆံပင်လေး ကို ဆွဲယူ နမ်းမိတယ် .. စံပယ် အနံလေး က သင်းနေတာပဲ . . သူ က လည်း ရင်ခုန်မှု နဲ့ ငြိမ်သက်နေခဲ့တယ် . .
နောက် ကျွန်တော် ရဲ့ စကားသံ တိုးတိုးလေး ပါ ပဲ .. ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံး ကို ငြိမ်သက်စေခဲ့မယ် ထင်တယ် .. ““ မီမို ကို ကျွန်တော် ချစ်တယ် ““ လို့ ပြောလိုက်တော့ သူရဲ့ ရီဝေ မျက်လုံးတွေ နဲ့
တစ်ခွန်းပဲ ဖြေတယ် .. ““ မတူညီ မဖြစ်နိုင်မှု တွေ ကို သိတယ် မဟုတ်လားတဲ့ . . ““
ကျွန်တော် က “ အင်း “ လို့ ပြောတယ် ..
ဘာ ဖြစ်လဲ လို့ ချစ်တာ ကို လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ .. သူ က ငြိမ်သက်သွားခဲ့တယ် . .
သူ့ အသက်ရှုသံ နဲ့ ကျွန်တော် နှလုံးခုန်သံတွေ ပဲ ကာရန်ကြိုးညှိ နေတယ်ထင်တယ် . .
အချိန် က တစက္ကန့် ခြင်း ကူးစီးလို့ . . .
ချက် . . ချက် … ချက် …
သူ့ ခေါင်းလေး တစ်ချက် မြှောက်ပြီး ကျွန်တော့် ကို ကြည့်တယ် . . ပြီးတော့ ပြန်ပီး ကုတင်ပေါ်ကို ခေါင်း ချ လိုက်တယ် . . . ပြီမှ အသံ တိုးတိုးလေး တစ်ခု နှလုံးသား တစ်ခုလုံး ဆီ အညင်သာဆုံး တိုးဝင်လာတယ် . .
““ ကျွန်တော့် ကို ချစ်တယ် ““ တဲ့လေ . . .
ပျော်လိုက်တဲ့ အပျော် . . ဒါပေမယ့် အချိန် က သိပ်မခံလိုက်ဘူး ည ကား စီး ဖို့ ဟိုတယ် က ထွက်ခွာ ချိန် က ကပ်နေခဲ့လို့လေ . .. အပြန်လမ်းမှာတော့ ပျော်ရွင်ခြင်း အတိ .. ရင်ခုန်ခြင်း အတိ .. ကြည်နူးခြင်း အတိ .. မြတ်နိုးခြင်း အတိ . . . သာယာခြင်း အတိ . . .
မန်းလေး ပြန်ရောက်တော့ လည်း သိပ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူ နှစ်ယောက်ပေါ့ .. မီမို က ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော့် ကို အပျောက်မခံဘူး . . ကျွန်တော့် အတွက် အရာရာ သူ မှ သူ ဖြစ်စေချင်ခဲ့တယ် . . အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော့် လိုအပ်ချက် မှန်သမျှ သူ ဖြည့်စည်းပေးခဲ့တယ် .. ကျွန်တော် ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် .. သူငယ်ချင်း တွေ လိုက်ကူဖို့လိုတဲ့ နေရာ မှန်သမျှ သူ နေရာ အစားဝင်ယူပေးခဲ့တယ် .. ဘယ်သူ နဲ့ မှ ဘယ်မှာ မသွားစေခဲ့ဘူး .. သူ အမြဲလိုက်ပါခဲ့တယ် . . ကျွန်တော် စကားပြောချိန်လေးတွေ ဆို . . ကျွန်တော့်ကို ငေး လို့ .. နားထောင်နေခဲ့တာ . . . သိပ်ချစ်တယ် မီမို ..
ချစ်သူ သဘာဝ ကမ်းနား မှာ သွားချိန်း ပေါ့ ၊ ပါးလေး နမ်း ပုခုံးလေး ဖက် .. နောက်ကနေ ခါးလေး ကို သိုင်းဖက် ရင်း . . လက်ကလေး ကို အပေါ်ကို မသိမသာဆွဲတင် . . . ချိုချိုလေး ကို သိသိသာသာ လှမ်းထိပေါ့ .. အဲလို နဲ့ အဆင့် တော့ မတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး . .
တစ်ရက် ကျွန်တော် အအေးမိသလို ဖြစ်သွားလို့ အပြင် မထွက်ခဲ့ပဲ အခန်းမှာ ပဲ ဇတ်ကားကြည့်ရင်း နားနေခဲ့တယ် .. မီမို သိသွားချိန်မှာတော့ လို့ စိတ်ပူပြီး တစ်ခါ မှ မရောက်ခဲ့ဘူး တဲ့ ကျွန်တော့် အခန်း ကို ရောက်လာခဲ့တယ် .. ကျွန်တော် က ဘာ မှ မဖြစ်ဘူး ဆိုတာ မရခဲ့ဘူးလေ .. ရောက်လာပီး ..
မောင် တစ်ခုခု ဆို မီမို ကို ပြောမှ ပေါ့ .. မီမို က မောင့် ချစ်သူလေ . . မောင် ဆီက အသံလေး မောင့် မျက်နှာလေး မမြင်ရရင် တစ်နေ့စာ နေလို့ ရမယ် ထင်နေလား . . စိတ်ဆိုး မျက်စောင်းလေး ထိုးပြီး ပြောတယ် . .
အခန်း ကို ကြည့်ပြီး ပစ္စည်းတွေ ကလည်း နေရာတကျ မရှိဘူး . . နောက်ရက်မှ သေချာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရမယ် ဆိုပြီး . . ပစ္စည်းတွေ ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့ လုပ် တယ် ။ လုပ်နေရင်း နဲ့ လည်း ပါးစပ် က လှမ်းပြောသေးတယ် ..
““မောင် ညစ် ပတ် ““ တဲ့ လေ .. .. ကျွန်တော်လည်း အထွန့်တက်တာပေါ့ .. မီ ရယ် .. မောင် ဖျားနေလို့ပါနော် ..
ကျွန်တော့် အတွက် သူဝယ်လာခဲ့တဲ့ ကြေးအိုး ကို မီးဖိုချောင်ထဲဝင် ပြီး ပန်းကန်ထဲ သွားထည့်တယ် ..
““ မီ . .ကြေးအိုးသွားထည့်လိုက်အုံးမယ် .. မောင် သောက်မယ် မလား ““
““ မီ . .ရတယ် မထည့်နဲ့ .. မောင် ဖျားနေတာ လည်း မဟုတ်ဘူး . ““
““ မောင် ဘာသာ ထည့်မယ် . မီ ထိုင်နေ . . ““
မီ က အတင်း သွားထည့်တယ် ..
ကျွန်တော် နောက် ကလေး လိုက်သွားရင်း မီ ကို ကြည့်ရင် .. ရင်ခုန် လာတယ် . .
မီ က ပန်းကန်ထဲ ကြေးအိုး ထည့် ပြီး ဇွန်းလေး ထည့် . . နောက် ကြွတ်ကြွတ် အိပ် ကို အမှိုတ်အိပ်ထဲ ထည့်နေတုန်း . .
မီ ကို နောက် က နေ သိုင်း ဖက်မိတယ် .. နောက် မီ ကိုယ်လုံးလေး ကို ဆွဲ ယူ ရင် နံရံဘက် ကို မီ ကို ဆွဲ မှီပြီး နှုတ်ခမ်းလေး ကို စုပ်ယူ မိတယ် .. ဘယ်လို ဖစ်တယ် မသိ .. တစ်အားရင် တုန် နေခဲ့တာ .. နောက် နှုတ်ခမ်း နမ်းနေရင်း နဲ့ လက် တစ်ဘက် က အောက် ကို ဆင်းခဲ့တယ် .. မီ တင်ပါး နဲ့ ပေါင်ရင်း ကို ပွတ်နေခဲ့မိတယ် .. မီ က တော့ လက် ကို လိုက်ဆွဲ ပေမယ့် ပြန်အပေါ်တင် လိုက်တယ် ..
ကျွန်တော့် အနမ်းမှာ“ မီ “ စီးမျောသွားတာ လား .. “ မီ “ အနမ်း မှာ ကျွန်တော် ကျရှုံးသွားတာ လား တော့ မသိဘူး . . သေချာ တာ က နှစ်ယောက်လုံး အနမ်း ကို လက်မလွတ်ခဲ့ဘူးလေ ..
ကျွန်တော် က သူ့ တင်ပါး နဲ့ ပေါင်ရင်း ကို ပွတ်ရင်း က နေ သူ့ လုံချည် ကို အသာ ဖြုတ်ယူလိုက်တယ် .. သူ တင်ပါး ကို နံရံမှာ ဖိကပ်ထားတဲ့ အတွက် အနောက် ကတော့ မကျွတ်ကျ ပဲ အရှေ့ အခြမ်းလေး ပဲ ပြေလျှော့ ကျ လာတယ်လေ ..
သူမ ကျွန်တော့် ကို တိုးဖက် ထားတယ် . . အနမ်းတွေလည်း လွင့်မျော လို့ . .
“ “ “ ရင်နှစ်ခု ရဲ့ လှိုင်း . .
ကာရံညီပန်း နှင်းဆီလမ်းဆီ “ “ “
“ တိမ် လို နိမ့်ဆင်း လိုက် . . တိမ်လို မြင့်သွား လိုက် . . . ဖမ်းဆုတ်မပြတတ်တဲ့ လှိုင်းတွေ ထ နေတဲ့ ရင်ပင်လယ် နှစ်ခု ထဲ မှာ ခုန်ကူး မျောပါ ရင်း . . . .“
ကျွန်တော့ လက် က သူ့မ ထမိန် အတွင်း မှ ပေါင်ရင်း တစ်လျှောက် လမ်းလျှောက်လို့ .. ပွတ်သီ ချော့မြူ ရွေ့လျားနေပေါ့ . . နောက် သူမ ပိပိ နား လက် ရောက်တော့ ဖေါင်းဖေါင်းလေး ထိတွေ့ပြီး
ခံစားမှု တစ်ခု က လက်ချောင်း လေး တွေ မှ တစ်ဆင့် နှုတ်ခမ်း ဆီသို့ . . တိုး နမ်းရင်း ..
မသိမသာ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ . . သူမ က မျက်လုံလေး မှိတ်ပြီး ခေါင်းလေး နောက်လန် ထားတယ် ..
အသာအယာ ငုံ ကြည့် မိတော့ ပန်းရောင် ပင်တီလေး က သူမ ပေါင်ဖြူဖြူလေး တွေ နဲ့ လိုက်ဖက်စွာ . .
နောက် ပင်တီ ပေါ်မှာ လက် ကလေး က ခုန်ပေါက် ပျော်ရွင်နေ လိုက်တာ .. ကလေးလေး တစ်ယောက် က သူမြတ်နိုးနေသော အရုပ်လေး တစ်ခု ထိတွေ့ ကိုင်တွယ် လိုက်ရ သလိုမျိုး . . ကိုင်တွယ်နေတုန်း . .
ဝေး ကွာ သွား မှာ ကို ကြောက်ရွံ့ နေ သလိုမျိုး . . ရောနှောလျက် . .
သိပ်မကြာပါဘူး . . ကျွန်တော် လည်း ပုဆိုး ကို ဖြေချ လိုက်မိတယ် ။ တိမ်တွေ ကြားလိုက်ပါရင်း ။
ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီကြား က တိုးထွက် တောင့်တင်းနေသော ညီကလေး ကို အပြင်သို့ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရင်း . . ကိုယ့်ဘာသာ ငုံ ကြည့်မိတော့ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် တောင့်တင်းနေပေါ့ ..။
အရင် လက် နဲ့ ကစား ချိန် တုန်း နဲ့ များ ကွာ ပါ့ . . ရင်ခုန်သံ သွေး တွေ နေရာ လပ် မကျန်အောင် တိုးဝင်နေတယ်ထင် ရဲ့ . . . ။
နောက် သူမ ပင်တီကြား ထဲ လက်ထဲ့ လိုက်တော့ . .
“ အင်း . . . “ ညည်းသံ တစ်ခု နဲ့ အတူ ကိုယ် ကလေး လည်း ဆတ် ခနဲ တုန်သွားခဲ့တယ် . .
နောက် ကျွန်တော် လည်း သူမ ကို တိုးတိုးလေး နဲ့ ကျွန်တော့် ညီလေး ကို လည်း ကိုင်ကြည့်မလား လို့ ပြောခဲ့မိတယ် ။ သူမ ရဲ့ ရှက်ရွံ့ နေတဲ့ အပြုံးအောက်မှာပဲ ကျွန်တော့် လက်က
သူမ လက် ကို ဆွဲ ယူ လို့ .. ကျွန်တော့် ညီလေး ဆီ သို့ . .
“ ဟာ “ . . ဒီတစ်ခါတော့ ညည်းသံ မဟုတ်ဘူး အာမေဋိတ် သံ တစ်ခု နဲ့ အတူ တစ်ချက် ဆုတ်ကိုင်ပြီး သူမ လက် ပြန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ် ။
သူမ လည်း တချက်ငုံ ကြည့်ပြီး ..“ ကြီးတယ် နော် “ တဲ့ .. ကျွန်တော် က မဟုတ်ပါဘူး .. ကျွန်တော့် ဟာ က ပုံမှန်လောက်ပါပဲ ။ နိုင်ငံခြားတွေ လောက် မကြီးပါဘူး လို့ ပြောခဲ့မိတယ် ။
နောက် သူမ ကို နင် အရင်က မြင်ဖူး လို့လား ဆိုတော့ ..
သူမ ငယ်စဉ် ကတည်း က ထိန်းလာ တဲ့ သူမ တူကလေး အခု ၇ တန်း ရောက်နေတဲ့ ကလေး ဟာ ကို မြင်ဖူးတာပါတဲ့လေ ။ ခစ် ခစ် .. အဲဒီ အရွယ်ထက်တော့ နာ့ ဟာ သာ တာ ပေါ့ .. မီမိုရယ် ….
သူမ နဲ့ ကျွန်တော် နံရံ က နေ ခွာ လိုက်တော့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ လုံချည် နဲ့ ပုဆိုးတွေ က အောက်မှာ ပုံလို့ . .
သူမ က လှမ်းကောက် မလို့ လုပ်တော့ ကျွန်တော် က သူမ ကို ဆွဲ ဖက်ထား လိုက်တယ် ။ နောက် တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် မြတ်နိုးစွာ ၊ ရှက်ပြုံး လေး တွေ နဲ့ သွားလေး ပေါ်အောင် ရယ် မိကြတယ်လေ ။
ရင်ဘတ် တွေ ပူးကပ်သွားခဲ့တယ် ထင်တယ် ။ သိပ်ချစ်တယ် . မီမို . . .
သူမ ကို ပြန်ခွာပြီး ကြည့်မိတော့ . . ဘလောက်အကျီ အဖြူလေး နဲ့ အောက်က ပင်တီ ပန်းရောင်လေး နဲ့ သူ အသားအရေ လေး နဲ့ လိုက်ဖက်စွာ ..
သူမ မငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခု ကို လျင်မြန်စွာ ရှေ့တိုးနေရာယူ ဖို့ ခေါင်းထဲ အလျင်အမြန်စဉ်းစား နေခဲ့မိတယ် . . ဒါမျိုးဆို အကြံဉာဏ် က .. သိပ် မတွေးခေါ်လိုက်ရဘူး . .
“ မီ . . . မောင် နေမကောင်း တာ နဲ့ ရေမချိုး မိဘူး .. မောင် ကို မီ ရေချိုး ပေးမလား “ လို့
ချွဲ နွဲ့စွာ . . . တောင်းဆိုမိတယ် . . ။ ( အမှန်က အကွက်ဆင်တာ ။ )
မီမို လည်း တစ်ချက် တွေးပြီး ချိုးလေ မောင် တဲ့ ။ ရင်ထဲ ကျိတ်ပျော်သွားတာ ပေါ့ ။
နောက် နှစ်ယောက်သား ရေချိုးခန်း ဆီ သို့ရွှေ့လျားခဲ့ကြတယ် ။
ကျွန်တော် က အပေါ်က တီရှပ်လေး ကို ချွတ်ပြီး ၊ အတွင်းခံလေး နဲ့ ရေချိုးခံ ဝင်လိုက်တယ် ။
မီ က လည်း ဝင်မယ် လုပ်တော့ . . ““ မီ အကျီရေစိုမယ်လေ ““ လို့ လှမ်းပြောလိုက်တော့ ။
“ ဟုတ်သား ပဲ “ .. ဆိုပီး ချွတ်မလို့ လုပ်ရင်း
“ . အဲ . . မောင် . . ဟိုဘက် လှည့် လို့ ပြော တယ် ““
“ “ အင်း … “ ဆိုပြီး လှည့်ပေး မိတယ်.. စိတ်ထဲ ကတော့ ခန နေ တွေ့ရတော့မှာ ကိုများ .. အကဲပိုတယ် လို့ တွေးမိပေမယ့် . .
သူမ အတွက်တော့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ကို ချက်ခြင်းကြီး အသားမကျသေးတာ ထင်တယ် ။
မီ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်လာတော့ ပင်တီ လေးရယ် ၊ ဘော်လီလေး မချွတ်ပဲ ဝင်လာတော့ . . ကျွန်တော် က ပြုံး စ စ နဲ့ စ လိုက်တယ် ..
အဲဒါ တွေ ရေစို ကုန်ရင်တော့ မီ ၊ မောင် ဆီ ည အိပ်နေရမယ်နော် .. မောင့်မှာ အပိုမရှိဘူး လဲ ဝတ် စရာ ၊ မောင့်မှာ စွပ်ကျယ် ပဲ ရှိတာနော် . . ဆိုတော့ မီ က . .
“ မောင် ဟိုဘက် ပြန်လှည့် “ တဲ့ . . သိပ်ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မီမို . .
“ ရ ပီ မောင် “ မောင် နောက် မလှည့် နဲ့ “ မောင် နောက် ဘက် ကနေ ပဲ မီ နေမယ် . . ဂျေး တွန်း ဆပ်ပြာတိုက် ပေးမယ်တဲ့ လေ
“ အင်း “ ဟုတ် ပီလေ ဆိုပြီး .. ရေ တစ်ခွက် ခပ် ပြီး နောက် ဘက် မီ ကို လှမ်း ပေး လိုက်တယ် . .
မီ က ယူ ပြီး ပုခုံး ကနေ ရေလောင်းပေးတယ် ။ နောက် တစ်ခွက် ခပ်ဖို့ ရေခွက်လှမ်း အပေးမှာ ရေခွက် ကို ခပ်မြန်မြန်လေး ခပ်ပီး . .
မီ ဆီ မပေးပဲ .. လည်ပင်း နဲ့ ပုခုံးဘေး နား ကပ် ပြီး အရှိန်မသိမသာ ထည့်ပီး မီ ကို ထိ အောင် ရေပက် လိုက်တယ် ။
“ ဟာ “ “ မောင် နော် .. မကောင်းဘူး ဒီမှာ စိုကုန်ပြီ “ ဆိုတဲ့ အသံ နဲ့ ကျောပြင် ကို မီ လက်နဲ့ လှမ်းရိုက်တယ်လေ ။ ကျွန်တော် လည်း
နောက် ဘက် ကို လှည့် ပြီး မီ ကိုဆွဲယူ လှမ်း ဖက် လိုက်တယ် . .
နူးညံ့ တဲ့ အသားပြင် ထိတွေ့ မှုနဲ့ . .ရေမှုန်လေးတွေ ခိုကပ်ပြီး လုံးတုံး လေး ဖြစ်နေတဲ့ မီ ခန္ဓာ တစ်ခုလုံး သိမ်းကြုံး ဖက်ထားလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ မီ နှုတ်ခမ်း ကို ဆွဲယူ နမ်း ပလိုက်တယ် ။ မီ လည်း ဒီတစ်ခါတော့ အလိုက်သင့် စီးမျော လို့ . .
နောက် ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီ တိုလေး ကို ချွတ်ဖို့ လက်ရွှေ့ ချိန် မှာ . .
မီ က အလိုက်သိ နဲ့ ချွတ်ပေး ခဲ့တယ် ။ ပြီး တော့ တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် ကြည့်ပြီး လက်ညိုးထိုးလို့
“ ရှက် .. ရှက် “ ဆိုပြီး ပြိုင်တူ ပြောရင်း ရယ် နေခဲ့တယ် ။
နောက် ရေ ချိုး ရင်း . . နောက် ပြောင် ရင်း . . နဲ့ မီ ကို ငေး မောရင်း နဲ့ . . .
မီ က ဆပ်ပြာ တိုက်မယ်နော် လို့ ပြောချိန် မှာ . . “ ဟင့် အင်း . . . “ ဆိုပြီး မီ ကို လှမ်းဖက် . . နှုတ်ခမ်းလေး ကို ပြန်စုပ်ယူ လိုက် ပြန်တယ် . . .
အတွေး ရိုင်းတွေ လည်း စိတ်မှာ ပူး ကပ်လို့ . . .
နောက် နို့ လေး ဆီ ဆင်းပြီး စို့ မိတယ် . . လက်တစ်ဖက် က လည်း ကျန်တဲ့ နို့ တစ်လုံးဆီ . .
နောက် ကျွန်တော့် ညီလေး ကို သူမ ပိပိ ဆီ သို့ ထိုးသွင်း မိတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရေမှုန်တွေ ကြောင့်လား . နှစ်ယောက်လုံး ရင်တုန် နေလို့လား .. ဘယ်လို မှ ထိုးသွင်း လို့ အထဲ ထိ မရောက်ခဲ့ဘူး ..
အနည်းအကျဉ်းပဲ ဝင်တယ်လေ ။ ကျွန်တော် နည်းနည်း ဖိ သွင်းကြည့်တယ် .. မတ်တပ်ရပ်လို့ လား တော့ မသိဘူး . . ခက်ခဲနေတယ်လေ ။ သူမ ရဲ့ နာ တယ် ဆိုတဲ့ အသံ နောက်မှာ ..
ခန ရပ်ပြီး ရေ ကို ပဲ ပြီး အောင် ချိုးလိုက်ရတော့တယ် ။
ရေချိုးပြီး လို့ အခန်းပြန်ထွက်လာတော့ . . သူမ အခန်းထဲ အဝတ်လဲ ချိန် မှာတော့ ဘေးနားကနေ ကုတင် ပေါ်ဆွဲ လဲ ယူ လိုက်တယ် ..
“ အို .. မောင် နော် “ .. ဆိုတဲ့ သူမ နှုတ်ခမ်းလေး ပေါ်လက်တင်ပိတ်ပြီး နမ်း လိုက်မိတယ် ..
နောက် ရေသုတ် တဘတ် ကိုဆွဲဖယ် လိုက်ပြီး . . သူမ ခန္ဓာ ကိုယ် ပေါ်သို့ အပေါ်မှ တက်ပြီး ရိုးရိုး အတိုင်း ပြန်သွင်း ဖို့ကြိုးစားတယ် .. နှုတ်ခမ်း ကိုလ ည်း ပုံမှန်ထက် ပို စုပ်ယူမိတယ် ..
နောက် သူမ နို့ ကို လည်း သေချာ ဆော့ကစား လိုက်တယ်လေ .. ကျန် လက် တစ်ဖက် ကလည်း တစ်ကိုယ်လုံး ထိတွေ့ ပြေး လွှား လို့ ။။ အဲဒီ နောက် သူမ ပိပိလေး က လည်း ရွဲ စိုလို့ .
. ညီကလေး က လည်း မာန်တင်း နေ ပြီလေ ..
သူတို့ နှစ်ယောက် နဲ့ ထိတွေ့ ပွတ်တိုက်မှု တွေ တွေ့ဆုံပြီး နောက် . .
သူမ အသံ လည်း မြန်ဆန်လာ ရဲ့ . . သူမ လက် နှစ်ဖက် က ကျွန်တော့ ကို တိုးဖက် ရင်း တစ်ချက် တစ်ချက် ကုတ်ခြစ် မိတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် မှာ နာ မှန်းတောင် မသိဘူး ။
သူ ကို ပုံမှန် ဆောင့် သွင်း ရင်း နဲ့ . . .
ကျွန်တော် လည်း သိပ် မကြာကြီး မဆောင့်လိုက်ရခင် မှာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ် ။ နှစ်ယောက်လုံး ငြိမ်သက်လို့ အသက်ရှုသံ တွေ က လွဲရင် . ..
“ လူဆိုးပဲ . . ဘာလဲ မသိဘူး “ တဲ့ ဆိုတဲ့ သူမ အသံလေး က နှစ်ယောက်သား တိတ် ဆိတ်မှု ကို ဖြိုခွင်းလိုက်တယ် . . သူမ ရေ ချိုးခန်း က နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လာပြီး . .. အဝတ်လဲ လိုက်တယ်။
နောက် သူမ ယူ လာ ပေးတဲ့ ကြေးအိုးလေး ကတော့ အေး စက် နေ ပီ လေ . . . ။ ဒါပေမယ့် သူမ ခွံ ကျွေးလို့လား တော့ မသိ . . သောက်လို့ ကောင်းနေခဲ့သည် ။
ရာသီဥတု သာယာမှုတွေ နဲ့ နေ့တစ်ချို့ ကို ကုန်လွန်စေခဲ့တယ် ။
“ လောကရဲ့ လမ်းများ အပေါ်လျှောက်သွားရင်း နဲ့ . . .. “ Ring Tone သံလေး မြည်လာတော့ ..
မေမေ့ ဆီ က ဖုန်း ဝင်လာ တယ် ၊ မေမေ မန်းလေး လာမယ်တဲ့ . . လာ ကြိုပါတဲ့လေ ။
“ ဝိုး “ . . . ကျွန်တော် သိပ်ပျော်သွားတယ် ။
မေမေ ကို လွမ်းနေတာ လေ ။ မေမေ ကဟင်းချက် သိပ်ကောင်းတယ် ။ ကျွန်တော် မေမေ့ လက်ရာစားရ တော့မှာပေါ့ ။
မေမေ ကို ရထား မှာ သွားကြိုတော့ မေမေ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး ၊ မေမေ ရယ် အန်တီ ယုရယ် . ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ရယ် ဖြစ်နေတယ် ။ အန်တီယု က မေးတယ် ..
“ သား သူတို့ ကို မှတ်မိလားတဲ့လေ ။ “
သေချာကြည့်မှ အန်တီယု သမီး အမွှာ နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ် ။
“ သိပြီ ပန်းဝေ နဲ့ လွမ်းဝေ မလား “
လို့ မေးလိုက်တော့ ဟုတ်တယ်တဲ့လေ .. အော် သူတို့ တောင် အရွယ်ရောက်လာပြီ ။ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းအောင် မြို့က ထွက်လာတုန်း က သူတို့ တွေ က ခုနှစ် တန်း ပဲ ရှိသေးတာလေ ။
အခုတော့ မာစတာ လာ တက်တာတဲ့လေ ။ 19 / 20 နှစ် အရွယ် အပျိုဖားဖား တွေ တောင် ဖြစ်ပီပေါ့နော် ။
ပန်းဝေ နဲ့ လွမ်းဝေ က ဆံပင် အရှည် ၊ အတို ပုံစံလေး ကွာ တာ က လွဲရင် ငြိမ်ငြိမ်လေး ရပ် နေလို့ ကတော့ လုံးဝ ပုံစံတူပဲ ခွဲ မရ နိုင်တာကတော့သေချာတယ် ။
ဒါပေမယ့် အခု က ပန်းဝေ က ဆံရှည်လေး နဲ့ ထမီလေး နဲ့ မဟာဆန်နေလေရဲ့ လွမ်းဝေ က အကြေကောက်လေး နဲ့ စကပ်လေး နဲ့ လန်းဆန်း နေ . ခဲ့တယ် ။
အန်တီယု က မိတ်ဆက်ပေးတယ် .. သူ့ သမီး နှစ်ယောက် နဲ့ ။
“ ဒါက အန်တီ မေ ရဲ့ သား . . သမီး တို့ အတွက် အစ်ကို တစ်ယောက် ပေါ့ “
ပန်းဝေ က “ ဟုတ်ကဲ့ “ လို့ ပြောပေမယ့် ..
လွမ်းဝေ က တော့ “ တွေ့ရ တာ အကူအညီ တောင်းဖို့ အစ်ကို တစ်ယောက်ရပီ ပေါ့နော် “ ..
“ အစ်ကို က ချောတယ် နော် “ .. လို့ ပြောင်စပ်စပ် နဲ့ နောက်လေ ရဲ့ ။။
ကျွန်တော်လည်း လူကြီးတွေ ရှေ့ မှာဆိုတော့ အင်းပါ ရပါတယ် ပေ့ါ ။ စိတ်ထဲ မှာတော့ ငါ့ ကို မခန့်တဲ့ကလေး တွေ့မယ်ပေါ့ …
မေမေ နဲ့ သူတို့ သား အမိတွေ ကို အိမ် ခေါ်ခဲ့ရတယ် ။ သူတို့က မန်းလေး မှာ ကွန်ပျူတာ မာစတာ လာတက်ကြတာတဲ့ ။ သူ့ အမေ က လိုက်ပို့ အဆောင်လိုက်ရှာပေးတာပေါ့ ။
အဲဒီမှာပဲ သူတို့ စိတ်ကြိုက် အဆောင်ရှာ မတွေ့တော့ . . . ကျွန်တော့် မေမေ က သမီးတို့ က ညီအစ်မ နှစ်ယောက်ပဲ ၊ သား တိုက်ခန်း မှာပဲ ဒီနှစ်ဝက် နေ လိုက်ပေါ့ ။
နောက် ကျောင်းတက်ရင်း ဖြည်းဖြည်း ရှာပေါ့ ဆိုပြီး . . သား က လည်း သူတို့ နှစ်ယောက် ကို စောင့်ရှောက် ရင်း လိုတာ ကူညီ ပေးလိုက်ပေါ့ ဆိုပြီး ကျွန်တော့် တိုက်ခန်း မှာ ထားသွားလေ ရဲ့
သွားပြီ . . သွားပြီ . . .
ကျွန်တော် ရဲ့ တစ်ကိုယ်တည်း လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ၊ ကြည့်ချင်တဲ့ ဇတ်ကား တွေ ကြည့်မရတော့ဘူး ၊ . . မီမို နဲ့ ကဲ ချိန် တွေ မလွတ်လပ်တော့ဘူး . . တော့ ဘူး .. ဆိုတဲ့ ကြားမှာ
သူတို့ ရှိတော့ ကော်ဖီ ဖျော်ခိုင်းလို့ ရတယ် .. တစ်ခါတစ်လေ အဝတ်ကူလျှော်ပေးတယ် . . အခန်း လည်း သန့်ရှင်းနေလေ ရဲ့. .
အဲလို ကောင်းကွက်တွေ တော့ ပြန်ရတယ်ပေါ့ ။ တစ်ခါတစ်လေတော့ လည်း လွမ်းဝေ ရဲ့ ပွင့်လင်း မှု က လည်း စိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်စေ ပြန်ရော . .
ခက်တာက သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး မဆိုးဘူး .. ဘော်ဒီ ရော အသားအရေ ရော .. လှတပတလေး တွေ ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် ပန်းဝေ ကို ပိုစွဲလမ်း သလိုပဲ ။ တည်ငြိမ် အေးချမ်း တယ် ။ လူကြီး ဆန် တယ်လို့ ပြောရမလားပဲ ။
လွမ်းဝေ ကတော့ ကြည့်လိုက်ရင် ပေါ့ပါးတယ် .. လွတ်လပ်တယ် . . လန်းဆန်းနေသလိုပဲ . . ။
အရင် နဲ့ မတူတာ က နံနက်နိုးလာရင် သွား တိုက်တံ ထဲ မှာ သွားတိုက်ဆေး ထည့်ပြီး အသင့် ။
စားပွဲ ပေါ်မှာ ကော်ဖီခွက် ကလေး နဲ့ ပေါင်မုန့် နှစ်ချပ် ။ ကော်ဖီ က တော့ ငွေ့ ငွေ့ လေးပဲ ပူတော့တယ် ။
အရင်တုန်း က ကျွန်တော့် ပုံမှန် အိပ်ရာထ ချိန် မရှိပေမယ့် . . အခု တော့ ပန်းဝေ ကို အားနာ တာ နဲ့ ၈ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်တော့ ပုံမှန်ထ ဖြစ်တယ် ။
7 နာရီ ခွဲ ဆို သူတို့ နှစ်ယောက် ကျောင်းကား ဂိတ် ကို လမ်းလျှောက်သွားပြီလေ ။
(ကျွန်တော့် အတွေးနော် .. ကော်ဖီတွေ သွားတိုက်ဆေးတွေ က ပန်းဝေ လုပ်ပေးတာပဲလို့ ယူဆ ထားတယ်လေ ၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှ မေး မကြည့်မိဘူး ။)
ည ဘက်တော့ ၉ နာရီ လောက်ဆို ကိုကို ကော်ဖီ သောက်အုံးမလား လို့ ပန်းဝေ က အမြဲမေး ပြီး ဖျော်ပေးတတ် တယ် ။
အဲလိုအချိန် ဆို အသံ တစ်ခု က အမြဲလိုက်လာတယ် .. မမ လွမ်းဝေ ကိုလည်း တစ်ခွက်ပိုဖျော်နော် တဲ့ လေ။
မှတ်မထား ပေမယ့် မှတ်မိနေခဲ့တယ် ။
အဲလိုဆိုတော့ လည်း သူတို့ ရှိတာ ကောင်းပြန်ရော ။
ဂရုစိုက်မှု ကို မသာယာတာ ဘယ်သူ ရှိမတုန်း ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလစ်တော့လည်း ငမ်းရတာပေ့ါ . . ယောင်္ကျားလေးပဲ နော့ . . ကိုယ့်သွေးသား မှ မဟုတ်ပဲ .. ကျွန်တော် ငမ်းမိ အပြစ်ရှိသည် ဟု ဆိုရင်လည်း .. အဲဒီ အပြစ် ခံယူယုံပါပဲလေ ။
တစ်ရက် မီမို လာလည် တော့ သူတို့ နှစ်ယောက် နဲ့ မိတ်ဆက်ပေး ခဲ့တယ် ။ ပျော်ရွင်လို့ ခင်မင် လို့ပါပဲ ။
ဒါ မေမေ သူငယ်ချင်း သမီး အမွှာနှစ်ယောက် လို့ ။
“ ဒီ စကတ် လေး နဲ့ က လွမ်းဝေ ၊ ဟို ဆံရှည်လေး က ပန်းဝေ “
ပန်းဝေ နဲ့ လွမ်းဝေ . . . “ ဒါ နင် တို့ အတွက် အစ်မ တစ်ယောက်ပဲ နာမည် က မီမို တဲ့ “
ဒီလောက် ဆို သဘော ပေါက်တယ် မလား လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
“ ဟုတ် မမ ၊ တွေ့ ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် မမ “ ပန်းဝေ က နှုတ်ဆက်ရင်း . .
မမ ထိုင်အုံးနော် .. ညီမ တို့ အပြင်သွားလိုက်အုံးမယ် ဆိုပြီး အပြင်ထွက်သွားကြတယ် ။
သူ တို့ ညီအစ်မ နှစ်ယောက် အပြင် ထွက်သွားပြီး . .
မီမိုနား ကပ် ထိုင် မလို့ ရှိသေးတယ် . . မီမို က ဗိုက်ခေါက် လာဆွဲတယ်လေ . . မျက်စောင်းလေး လည်း ထိုးပြီး . .
“ တော်တော် ပျော်နေတယ် ပေါ့ နော် တဲ့ ၊2in 1 ဆိုပြီး . . .“
“ ဟာ . . မဟုတ်ရပါဘူး မီ ရယ် ၊ မောင် ချစ်တာ မီ တစ်ယောက်ထည်းပါ ၊ မောင့် ကို ပိုင်ဆိုင်တာ မီပါ “
“ ဒါပဲ နော် .. မောင် ဆီ က နေရာလပ် မကျန် အကုန် မီတစ်ယောက်ထဲ ပိုင်တာ နော် “
“ မောင့် အတွေးတွေ ရော အားလုံးပဲ နော် ၊ တစ်ခုခု ဆိုလို့ ကတော့ ကတ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ပစ်မှာ “
“ အင်း ပါ မီ ရယ် “ လို့ ပြောနေရင်း စိတ်ထဲ မှာ တော့ ပန်းဝေ အရိပ် က ပြေး မြင်မိအောင် မြင်မိသေးတယ် ။
“ ပြီးတော့ မှ မီ ရယ် ၊ တွေ့ချိန်လေး တွေ မှာ ပျော်ရွင်အောင်နေပါပေါ့ “ .. ဆိုပြီး
လာ .. ဆွဲ နမ်းပြီး ၊ အခန်းထဲ သွား မယ် လို့ ခေါ်လိုက်တယ် ။
မီ က ပြောတယ် . . . “ ဒါပဲ တွေးနေ … ဆိုပြီး . . . “ လိုက်လာခဲ့တယ်
လက်လေး ဆွဲ ပြီး အခန်းထဲ ရောက်တော့
မီ ပုခုံးလေး ကို လှမ်းဆွဲ ပြီး မှ နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲ နမ်းယူ လိုက်တယ် . . နှုတ်ခမ်းချင်း ဖြည်းဖြည်း နမ်း ရင်း
နားထင်နား တစ်လျှောက် ဆီသို့ . . နောက် လည်ပင်း ဆီ ရောက်လာချိန်မှာတော့ လက် တစ်ဖက် က နို့ အုံလေး
ကို အကျီပေါ်ကနေ အုပ်ပြီး ချေနေမိတယ် ။ နောက် ကြယ်သီး တစ်လုံး ချင်း ဖြုတ်လိုက်ချိန်မှ တော့
သူမ က အလိုက် တသိ နဲ့ ဘရာ ချိတ် ကို လှမ်းဖြုတ်ပေးတယ်။
နောက် မီ . . စကဒ်လေးချွတ် ချ လိုက် ချိန်မှာတော့ အနီရောင် အတွင်းခံလေး ။
( ကြာရင် မီ ရဲ့ ဘရာ နဲ့ အတွင်းခံ အကုန်မှတ်မိတော့မယ် ထင်တယ် ။)
မီ ကို . . ကုတင် စောင်းလေး ပေါ် ထိုင်ချ ပြီး မှာ နောက်ပြန်လှန် တွန်းလှဲ လိုက်တယ် ။ ကျွန်တော် က အကုန် ချွတ်လိုက်တယ် . . .
ပြီးမှ ချိုချိုလေး ကို ငုံ ပြီး စုပ်ယူမိတယ် ။ လက်တဖက် က ကျန် ချိုချို ကို အုပ်မိုးရင်း .. ခြေထောက် အထိ လျှောက်သွားနေတယ်။
နောက် အောက် ဘက် ဆင်းလာ တော့ ဘောင်းဘီလေး ကို
သွား လေး နဲ့ ကိုက်ပြီး .. ဘောင်းဘီ ရှေ့ခြမ်းလေး ကို ဆွဲချ လိုက်တယ် .. နောက် လက်နှစ်ဘက် အကူအညီ နဲ့
ပေါင်တံ လေး တစ်လျှောက် လိမ့်ဆင်းပြီး ချွတ်ချ လိုက်တယ် ။
နောက် ကျွန်တော့် လိင်တံလေး နဲ့ မီ ကို ကုတင်စောင်းလေး မှာပဲ ဖိ သွင်း လိုက်တယ် ။
“ အား . . . ဖြည်းဖြည်း .. မောင် “
ဖြည်းဖြည်း နဲ့ မှန်မှန် ဆောင့် နေရာ .. အရည်လေး တွေ ရွဲစို လာတယ် ..
“ အား … ဆောင့် .. ဆောင့် ။ ။ “
ဆိုပြီး မီ ကိုယ်လို့ ကြွ . . . ကြွ တက်လာတယ် ။ ကျွန်တော် လည်း စိတ်ပါ လက်ပါ … ပေါ့ . .
နောက် လေး ငါး ဆယ်ချက် လောက် ဆောင့်ပြီး ချိန်မှာတော့ နှစ်ယောက်လုံး မောဟိုက်လို့ . .
တစ်ရက် လွမ်းဝေ က ကျွန်တော့် ဆီရောက်လာတယ် ။
“ ကိုကို ကွန်ပျူတာ ခန ငှားပါ လား ။ လွမ်းဝေတို့ ကျောင်းမှ စာတမ်း အတွက် စာရိုက်ချင်လို့ “ ..
ကိုကို အားတဲ့ အချိန် ကွန်ပျုတာ ငှားလေ တဲ့ ။
ကျွန်တော် ကလည်း ရပါတယ် ယူပေါ့ ။ PW က တော့ . . .. *** လို့ ပြောပြီး ပေးလိုက်မိတယ် ။
လွမ်းဝေ နဲ့ ပန်းဝေ ကျောင်းစာရိုက်ပြီးသွားတော့ လွမ်းဝေ က ကိုကို ကွန်ပျူတာထဲ လျှောက်ကြည့် လိုက်အုံးမယ် .
. ယောင်္ကျားလေး ကွန်ပျူတာ ဆိုတာ အစုံရှိတတ်တယ် . . နင် ကြည့် မလား ဆိုတော့ . . ပန်းဝေ က ရှက်ရှက် နဲ့
“ မလုပ်ပါနဲ့ အေ “ ဆိုပြီး အပြင် ထွက်သွားတယ် ။
လွမ်းဝေ က .. ကွန်ပျူတာသမားပဲ . . သိပ်မရှာ လိုက်ရဘူး . . Vidoe X ရော Don’t Open Boy only Folder ရော တွေ့ တယ် .လေ ..
ဘာ တွေ လဲ ဆိုတာတော့ သိပ်ပြောစရာ မလိုဘူး ထင်တယ် . .
လွမ်းဝေ လည်း သိချင် မြင်ချင်တာ နဲ့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ် . . ဓါတ်ပုံတွေ ကတော့ အစုံပါပဲ . . ဒါပေမယ့် မိန်းကလေး ပုံတွေ ပဲ များတယ် . .
ဒါ နဲ Video ဖိုင် ပဲ လှည့်လိုက်တယ် ..
ရင်ခုန်သွားတာလား ရင်တုန် သွားတာ လား တော့ မသိဘူး .. မရဲ တရဲ နဲ့ ပဲ ကြည့်ပလိုက်တယ် . . သူတို့ တွေ က တော်တော် ပူအိုက်တယ်
ထင်တယ်နော် . တစ်ယောက်မှ ကို အကျီ ဘောင်းဘီ စကပ် အကုန် ချွတ်ပစ်တာပဲ .. ( နောက်တာ ) စိတ်ထဲ မှာ တော့ ရေငတ်နေသလို . . . ။
ည ကျ တော့ ပန်းဝေ ကို ပြောပြခဲ့တယ် ။ ပန်းဝေ က ဟုတ်လား ဟုတ်လား နဲ့ .. ရှက်စရာကြီး ဆိုပီး အကုန်လုံး နားထောင် သွားတယ် ။
ပြန်မေးလိုက်နဲ့ ပေါ့ ။ သူလည်း လူသားပဲလေ .. ယောင်္ကျားလေး ဆိုတာ ဘာလဲ နဲ့ ရင်ခုန်ခြင်းတော့ ရှိမှာပေါ့ ။
သူ့ မျက်ဝန်းတွေ ထဲ ရင်တုန်နေမှာ သေချာတယ် .. အားလုံးပြီးတော့ တစ်ခုပဲ ပြောတယ် .. လွမ်းဝေ နင် နောက်ခါကြည့်ရင် ငါ လည်း ခေါ်နော် တဲ့ ။ . .
နောက် ရက်ကျတော့ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ ဖွင့် ကြည့်ရင်း လွမ်းဝေ ဘာ တွေ လုပ်လဲ ကြည့်လဲ ဆိုပြီး Recent ဖိုင်လေး တွေ ဖွင့်ကြည့် မိတော့
ကျွန်တော့် ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်တယ် ဆိုတာ တွေ့သွားတယ် ။ ဒါ နဲ့ ကျွန်တော်လည်း မထူးပါဘူး ဆိုပြီး အညင်ကပ်ကပ် နဲ့ Desktop ပေါ်
ဖိုဒါ ဆောက်လိုက်တယ် Don’t Open , Lwan wai Only ဆိုပြီး ရေးပြီး ကောင်းနိုးရာရာ တွေ စုပြီး ထည့်ပေး လိုက်တယ် ..
ဘာ တွေ လဲ ဆိုတာတော့ သိတယ် ဟုတ် ။
နောက်ရက် ည ဘက် ကျတော့ ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာ ကို ပြန်ကြည့်တော့ . . Don’t Open ဆိုတဲ့နေရာ မှာ I Like ! ဆိုပြီး ပြင်ထား တယ် . .
မှတ်ကရောပဲ .. ကျွန်တော့် ကို မခန့်ပေါက်များ ပြန်တောင်ရေးသွားလိုက်သေး တယ် ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက် ကျွန်တော် အလုပ်ပိတ်ရက် ဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ စားချင်တာလေး ချက်စားမယ် ဆိုပြီး ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နေခဲ့တယ် ။
အိုက်လည်း အိုက်တော့ အပေါ်အကျီဝတ်မထားမိဘူး .. အောက် ကတော့ ပုဆိုး နဲ့ ပန်းကန်ဆေး နေခဲ့တယ် ။ ပြီးရင်တော့ ရေချိုးပြိး ထမင်းစားမယ်ပေါ့ ။
ပန်းဝေ က နောက်ကနေ ကိုကို ထမင်းတွေ ချက် ပန်းကန်တွေ ဆေးလို့ပါလား ဆိုမှ လန့်ပြီး နောက်လှည့်မိတယ် ။
( အခန်းသော့ က သူတို့ ညီအစ်မ မှာလည်း တစ်ယောက် တစ်ချောင်းစီ နဲ့လေ ) . .
အင်း .. ဟုတ်တယ် .. အလုပ်အားတာနဲ့ ပန်းဝေ လို့ လှည့် အပြောမှာ . .
ပုဆိုး က ဘေစင် နဲ့ ညှိ ပြီး ကွင်းလုံးကျွတ်ကျတယ်လေ ။
ပန်းဝေ ပါးစပ် က လည်း .. .“ အိုး “ … ဆိုပြီး ကြောင်ရပ်နေတယ် ..
ကျွန်တော် က လည်း အောက်ခံဘောင်းဘီ မပါမိဘူးလေ .. လက်နှစ်ဘက် ကလည်း ပန်းကန် ကိုင်ရက်တန်းလန်းဆိုတော့
လိုက်ဆွဲ ပေမယ့် ပန်းကန် လွတ်မှာစိုး .. ပုဆိုး မမိမှာစိုး နဲ့ . . စိတ်ဒွိဟ မှာ အကုန်ကျွတ်ပြီး ကုန်းကွကွလေး ဖစ်နေတယ် . .
ပန်းဝေ လည်း 15 စက္ကန့် လောက် ကြောင်ကြည့်နေပီးမှ . . . ဟီး . . .ဆိုပြီး ဧည့်ခန်း ဘက် ပြေးထွက်သွားတယ် ။
သွားပြီးပေါ့ .. နာ တော့ လစ်ပါပီ … ဒီကလေးမ ရှေ့မှာပေါ့ .. တစ်ခုပဲ တော်သေးတယ် .. လွမ်းဝေ မဟုတ်လို့ .. မဟုတ်ရင် စ တာတော့ ခံလိုက်ရအုံးမှာ ..
ခွမ်း . . ပန်းအိုးကွဲ တဲ့ အသံ နဲ့ အတူ လန့်နိုးလာခဲ့တယ် . .
သွားပါပြီ ။ နောက်ကျပါတယ် ဆိုမှ ဆိုတဲ့ လွမ်းဝေ အသံ က နောက်က လိုက်လာတယ်
ပန်းဝေ မြန်မြန်လုပ် ကျောင်းနောက်ကျတော့မယ် . . ရေ က မချိုးရသေးဘူး . . ရေချိုးခန်း နင် အရင်ဝင်မှာလား ..
ငါ အရင်လား .. ထူးပါဘူးအေ .. တူတူ ချိုးမယ် .. ကြာပါတယ် .. နင့် ဟာ ငါ အကုန်မြင်ဘူးတယ် ဆိုတဲ့
လွမ်းဝေ အသံ စာစာ နေ ကို တိတ်တိတ်လေး နားထောင်နေမိတယ် ..
နာရီ ကြည့်မှ ၇ နာရီ ခွဲ တော့မယ် ကိုး .. ၈ နာရီ ကျောင်းကားအရောက်သူတို့ ပြေးရအုံးမှာလေ ..
ခါတိုင်း ကျွန်တော် အိပ်ရာနိုးရင် သူတို့ နှစ်ယောက် ကျောင်း အမြဲသွားပြီ . . ဒီနေ့တော့ ပန်းအိုး ကွဲသံ နဲ့
အတူ နိုးလာ ပြီး သူတို့ အသံလေး တွေ နားထောင် မိတယ် ။ နောက် ဟာ ရေချိုးခန်း ထဲ နှစ်ယောက် ဆို
တဘက်တွေ ရေစို ကုန်မှာပေါ့ . . ဒါဆို လည်း အပြင် မှာ ခန ထားထား လိုက်မယ် .. ကိုကို မှ မနိုးသေးတာ
ဆိုတဲ့ အသံလည်း ကြားရတယ် .. ( ရေချိုးခန်း က တိုက်ခန်း ဆိုတော့ တစ်ယောက်စာ ပဲလေ )
အဲဒီ မှာ သူတို့နှစ်ယောက် ကို စ ဖို့ အကြံ ရ သွားတယ် .. တိတ်တိတ်လေး ထ သွားပြီး ရေချိုးခန်းရှေ့ က သွားစောင့်နေလိုက်တယ် ..
သူတို့ ရေချိုးပြီး ခါနီးလောက် မှာ အသံ ပြုလိုက်တယ်လေ . .
လွမ်းဝေ တို့ ပြီးတော့ မှာလား .. ကိုကို လည်း မျက်နှာ သစ်အုံးမယ်ပေါ့ အပြင်မှာ စောင့်နေမယ်ပေါ့ . .
အဲဒီမှာ .. ပန်းဝေ ရဲ့ ဟာ .. ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ အသံလေး ထွက်လာတယ် ..
လွမ်းဝေ ကပြန်အော်တယ် .. ကိုကို ဧည့်ခန်း က သွားစောင့် လွမ်းဝေ တို့ ပြီးရင် အော်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့ . .
ကျွန်တော် က လည်း ဒီ အကွက်စောင့်နေတာလေ .. သွားပါဘူး လို့ အော် လိုက်တယ် ..
ပန်းဝေ က တော့ ကိုကို အပြင်သွားပါ ဆိုတဲ့ အသံငယ်လေး နဲ့ ပြန်အော်နေတယ် ။
လွမ်း ဝေ က တော့ ရတယ်လေ .. ကိုကို မသွားလည်း . . လွမ်းဝေ ကေတော့ ပြေးပြီ . .
ဆိုတဲ့ အသံ နဲ့ အတူ တံခါး ဖွင့်သံ ကြားရတယ် .. ပြီးတော့ တန်းနေ အောင်
သူ့ အခန်းဆီ ပြေးထွက်သွားလေ ရဲ့။ ပြီး တံခါး ပြန်ပိတ်သံ သာကြားလိုက်ရတယ် ။
အမှန်က မြင်ချင်တာ က ပန်းဝေ ကိုလေ . . လွမ်းဝေ ကိုတော့ မမြင်ချင်ပေမယ့်
သူ့ နောက်ကျောလေးတော့ ကြည့်လိုက် မိတယ်လေ . . . သူ လည်း လှတာပါပဲ . . .
သူတို့ နှစ်ယောက် ကိုယ်လုံး က သိပ်မကွာဘူးလေ ။
တစ်ရက် ကျွန်တော် မေမြို့ ကို သုံးည အိပ်လောက် အလုပ်ပေါ်လာတာ နဲ့ မေမြို့ တက်သွားခဲ့ရတယ် ။
သူတို့ညီ အစ်မ ကို အိမ် သေချာစောင့် ဖို့ .. မီး ဂရုစိုက်ဖို့ မှာခဲ့ရတယ် ။
ဖြစ်ချင်တော့ အလုပ်က တစ်ရက် ညနေဘက် စောပြီးတာနဲ့ မေမြို့မှာ မအိပ်တော့ဘူး .. ည ပိုင်းပဲ မန်းလေး ကို ဆင်းလာခဲ့တယ် ။
ည ၉ နာရီ လောက်မှ အိမ်ရောက်တယ် ။ အိမ် ရောက်လို့ တံခါး ဖွင့်လိုက်တော့ . .
ဘယ်လို မှ မထင်ထားတဲ့ မြင်ကွင်း က ဆီးကြိုနေတယ် . . .
ဧည့်ခန်းစားပွဲ ပေါ်မှာ ဘီယာ ပုလင်း နဲ့ ခွက်တွေ . . ဘေး စားပွဲ ပေါ်မှာ က ကျွန်တော့် လက်ပတော့လေး . .
ဖွင့်ထားတာ က Englsih aww Movie အကြမ်း . . ဘေးနား ကို ဆက်ကြည့်တော့ လွမ်းဝေ နဲ့ ကျွန်တော် မမြင်ဘူးတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက် . .
လွမ်းဝေ က မြင်သွားမှ ကိုကို ပြန်တာတာ တစ်ရက်စောတယ် နော်တဲ့ . . ဒါနဲ့ ပန်းဝေ ရော လို့ မေးလိုက်တော့
သူ့ သူငယ်ချင်း အဆောင် မှာ သွားအိပ် စာကျက်တယ်တဲ့ ။ ဒီနေ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း အသည်းကွဲ လို့ ဆိုလို့ပါတဲ့ ပြောတယ် ..
ကောင်မလေး ရော လွမ်းဝေ ရော ရစ်နေပြီလေ . . ဒါ နဲ့ နင်တို့ က နှစ်ယောက်ထဲ သောက်နေတာလား ဆိုတော့ ဟုတ်တယ် ကိုကို တဲ့ . ..
ကျွန်တော်လည်း မိန်းကလေး နှစ်ယောက် ထဲ ဆိုတော့ အားနာ တာ နဲ့ လွမ်းဝေ ဒါဆို တံခါး ကို လုံအောင်ပိတ် ..
ကိုကို သူငယ်ချင်းဆီ သွားအိပ်လိုက်မယ် လို့ ပြောလိုက်တယ် . .
လွမ်းဝေ သူငယ်ချင်း က ရပါတယ် ကိုကို ရဲ့. . သက် တို့ကို အားမနာပါနဲ့ ။
သက် တို့ က ကိုကို့ ကို အားနာရမှာလေ . . ကိုကို သောက်တယ် မလား .. ကိုကို လဲ လာဝိုင်းလေ တဲ့ ။
လွမ်း ပြောပြထားလို့ သက် က ကိုကို အကြောင်းတွေ ကြားဖူးထားပါတယ်တဲ့ .. ( သေပီ .. ဘာတွေ လျှောက်ပြောထားပါလိမ့် )
ကိုကို . . လာ ထိုင်ပါ .. သက် ယောင်္ကျားတွေ အကြောင်းလည်း မေးချင်သေးတယ် .. ကြည့်လိုက်တော့ မူး စ ပြုနေပီလေ ..
လွမ်းဝေ က လည်း ကိုကို လာပါ . . ဆိုပြီး .. ကွန်ပျူတာ ကို လှမ်း ပိတ်လိုက်တယ် . .
ဟုတ်ပါ့ .. ဘီယာ တူတူသောက်တာ လွန်လှပေါ့ . . ကွန်ပျူတာ ထဲ ဟို ကား ဖွင့်ထားရက်တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲ ..
သက် က မေးတယ် .. ယောင်္ကျားလေး တွေ က မိန်းကလေး တွေ ကို ဘယ်လိုကြိုက်တာလဲ တဲ့ . .
အချစ်လား . . အလှအပလား .. လိုးတာ လားတဲ့ . .
လွမ်းဝေ က ဝင်ပြောတယ် .
“သက် က ချစ်ချစ် နဲ့ လမ်းခွဲလာတာ“ တဲ့ . .
သက် ကလည်း ပြောတယ် ..
ကိုကို နဲ့ မီမို အကြောင်းပေါ့ . .လွမ်းဝေ ပြောလို့ အကုန်သိပီးသား … ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေပါ တဲ့ . .
“ ကိုကို လည်း လူပျို မဟုတ်သလို . . သက်လည်း အပျို အစစ် မဟုတ်ဘူး . . “
လွမ်းဝေ ကတော့ မကြားသလိုနေပေါ့ဟာ .. တဲ့ . .
“ ယောင်္ကျားလေး တွေ က လိင် ကြိုက်တယ်ဆို . . အခု သက် လည်း ချစ်သူ ကို သက် အကုန်ပေးပြီး ..
ဒါပေမယ့် အခု သူ နောက်တစ်ယောက် ထပ်တွဲ သွားတယ်. .. “
“ အဲဒါ ဘာ လို့လဲ့တဲ့ “.. ငို သံ နဲ့
မူးနေပြီ .. ဘီယာတော့ ဟုတ်လောက်တော့ဘူး . . အချစ်မူး မူး နေတာ ဖြစ်လောက်တယ် ..
ကျွန်တော် လည်း ဘာ ဖြေရမှန်း မသိ။
“ အဲလို တရားသေတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ . . အချို့ အချို့ သော အကြောင်းအရာတွေ လည်း ရှိနိုင်တာပဲ “ လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ကိုကို . . သက် ကို တစ်ချက်ကြည့်အုံး .. သက် က မလှလို့လား .. ယောင်္ကျား တစ်ယောက် ကို တောင် မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးလား “
ဆိုပြီး .. အကျီကို ချွတ်ချ လိုက်တယ် ။ နောက် စကဒ် ကို ချွတ်ပြစ်လိုက်ပြီး ။
ဘရာ ကြိုးပျောက်လေး နဲ့ ပင်တီ အနက် ကလေး ရယ်ပဲ ကျန်တယ်။
အတွင်းခံ လေး တွေ နဲ့ မတ်တပ်ရပ်ပြတယ် ။
ကျွန်တော် လည်း မရဲ တရဲ ပေါ့ ။ အားနာနာ နဲ့ ပဲ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ သိပ် အပိုအလို မရှိသပ်ရပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးပါပဲ ။
သက် ကောင်လေး လည်း အခြား တစ်ခုခု ကြောင့်ဖြစ်မှာပါ။ သက် က လှပါတယ် လို့ ပြောမိတယ်။
စကားပြောရင် တစ်ယောက် တစ်ခွက် ထပ်သောက်မိတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် အတော်လေး ယိုင်နေပီ။
လွမ်းဝေ က မေးတယ် . . ကိုကို .. သက် နဲ့ မီမို ဘယ်သူ ကိုလှ သလဲ
“ သေပီ ဆရာ . . ဒါမျိုးကတော့ အခု ချိန်မှာတော့ .. ဖြေရမှာ ကတော့ တူတူ လှပါတယ်ပေ့ါ “
သက် က လည်း .. ဒါဆို လွမ်း နင် လည်း ချွတ် .. ငါ နဲ့ နင် ဘယ်သူ ပိုလှသလဲ .. ကိုကို ဖြေ ။
လွမ်းဝေ က လည်း မူးနေတာရော . . စိတ် တွေ ထွေပြားနေချိန်ထင်ရဲ့ ။ ဘာမှ ကို မငြင်းဘူး ..
သူလည်း ဘရာ ကို အလှကြိုးလေး နဲ့ ချိတ်ထားတယ် ။ ပင်တီ က တော့ အနီလေး နဲ့။
လွမ်းဝေ လည်း အတွင်း ခံ လေး တွေ နဲ့ . .
“ နှစ်ယောက် လုံး လှ ပါတယ် . . . သိပ်လှ . . ဟုတ်တယ်နော် .. လွမ်းဝေ “
ထိုင်တယ် ကြည့်မိတယ် . .
အဲဒီ အချိန်မှာ သက် က အရှိန်တက်နေလို့လား မသိ . .
သက် တို့ နှစ်ယောက် က ချွတ်ထားတယ် ။ ကိုကို လည်း ချွတ်လေ တဲ့ . . . ခက်ကပီ ။
သူတို့ ကတော့ သူတို့ အရှိန် နဲ့ . . ကျွန်တော့်မှာ မူး က လည်း မမူး .. လူကြီး ကလည်း ဖြစ်နေပြန်တော့ ..
တော်တော် စဉ်းစားနေချန် .. လွမ်း ဝေ အသံ က ပါ လိုက်လာတော့ . .
ကျွန်တော် လည်း အတွင်းခံလေးပဲ ချန် ပီး ချွတ်လိုက် ရ တော့ တယ် ။
“ ဟေး . . ဒါမှ လွမ်း ကိုကို ကွ .. “
“ သက် . . . နင့် ချစ်ချစ် နဲ့ ကိုကို .. ဘယ်သူ တောင့် သလဲ “
“ ဟာ . . လွမ်း က လည်း ကိုကို ပို တောင့်တာပေါ့တဲ့ . . “ သက် က ပြန်ဖြေ တယ် ။
နောက် ဆက်တွဲ စကားက လူကို လန့်သွားတာပဲ “ ကိုကို့ ဟာ က လည်း ဖောင်းတင်း နေတာပဲ တဲ့ “
“ မဟုတ်ပါဘူး .. ပေါ့ .. “ ငြင်းမိပေမယ့် သူတို့ ရဲ့ အတွင်းခံ ကျန် ဘော်ဒီ လေး တွေ ကြည့်ပီး .. အောက်က ကလေး က တောင့်တင်းနေပီလေ ။
“ ဟာ . . နင် က လည်း ကိုကို ကို အားနာစရာ . . “
လွမ်းက ရီဝေ နေပေမယ့် . . အစ်ကို ဆိုတဲ့ အသိက လွတ်တစ်ချက် မလွတ်တစ်ချက် နဲ့ ဖြစ်နေပုံပဲ ..
“ ကိုကို ကလည်း ပြန်ပြောလိုက်စမ်းပါ . . လွမ်းကို . . ငါ တို့ က လှ လို့ ကိုကို ဟာ တောင့်တင်းလာတာ မဟုတ်လား . . “
“ လွမ်းရာ . . နင် ရော အခု ကိုကို ပုံစံ ကို မြင်တော့ ဘယ်လို နေလဲ .. မလိမ်ကြေးနော်တဲ့ .. “
“ အာ . . နင် ကလည်း ဒါမေးစရာလား .. “
လွမ်းက “ ဟုတ်မှာပါလေ .. ဝတ်စုံပြည့် တောင့်တင်းလှပတာ လေးတွေ မြင်ရင်တောင် ငမ်းနေကြတာနော့ ကိုကို . . ဟုတ်တယ်ဟုတ် “
ကျွန်တော့် မှာ ငြင်းဖို့ ခွန်အား မရှိတော့ပါ . . ကိုယ့်ထက် အငယ်တွေ ဆိုတော့ ဦးဆောင် ပြောဖို့ ရှက်နေခဲ့တယ် . . ဒါပေမယ့် ရှောင်ပြေးထွက်သွားဖို့လည်း .. မြင်ကွင်းတွေဆီ က မလွတ်မြောက်ဘူး ..
သက် က ခွက်မြောက်လိုက်တယ် . .
“ အချစ်ကို ထားခဲ့ဖို့ အတွက် “
ခွမ် . . ခွက်ချင်းတိုက်သံ တွေ တိုးတိုး လှုပ်ခပ်သွားတယ် . .
“ ကိုကို . . . အခု တော့ ဘာမှ အားမနာပါနဲ့ . . ညီမတွေ လို လဲ စိတ်ထဲမထားပါ နဲ့ ..
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ . . Close Friend . . ပေ့ါ .. စိတ်တူ ခံစားချက်တူ .. သူငယ်ချင်းတွေ အဖြစ် တွေးပါ“
“ လွမ်း . . နင် အားနာရင်တော့ အိပ်တော့ နော် . . ကိုကို ရောက်လာတော့ နင့် ကို အားနာတယ် .. ငါ ကိုကို့ ကို မေးစရာ တွေ ရှိသေးတယ် .. နင် ရှက် တယ် ဆို အိပ်လို့ ရပီ .. ငါ့ ကို အဖော် လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးပဲ နော် “
ကျွန်တော် လည်း သက် ကို အခုမှ တွေ့လို့ စိတ်ထဲ ဘာမှ သိပ်မရှိပေမယ့် . .
လွမ်းဝေ ကိုတော့ အားနာ တာလိုလို .. ရှက်တာလိုလို နဲ့ စိတ်ထဲ မလုံခြုံသလိုခံစားရတယ် .
“ ဟုတ်သားပဲ . . လွမ်း . . နင် နား ချင် နား လိုက်လေ .. ဒါမှ မဟုတ် ..
ကိုကို နား လိုက်တော့မယ် .. သက် နဲ့ လွမ်း .. Carry on … “
“ ဟာ . . ကိုကို မနား နဲ့ မေး စရာ တွေ ရှိသေးတယ် .. လွမ်း နင် နားတော့ .. “
“ အေးပါ . . နင် ပီး ရင် သာ ဝင်ခဲ့တော့ .. ငါ အခန်းထဲ ဝင်နှင့်တော့မယ် . .
ငါ မရှိမှ ဆိုတော့ နင် မဟုတ်တာ တွေ မေးမလို့ မလား .. ငါ့ ကိုကို ကို တော့ မဆွဲ ဆောင် နဲ့ နော် ..
ကောင်မ .. ကိုကိုမှာ ချစ်သူ မမ မီမို ရှိတယ်နော် “
“ စိတ်ချ စမ်းပါ . .. ယောင်းမ ရာ .. တစ်ခါတည်းပါ . . . ဟိ “
“ ကိုကို .. ဒါဆို လွမ်း အခန်းထဲ ဝင်နှင့်တော့မယ်နော် “
သက် က မေးတယ် ..
“ ကိုကို .. လိင်ကိစ္စ မှာ ရော ညှိတွယ်မှု တွေ များလား တဲ့ “
ကျွန်တော် ဘာ ပြန်ဖြေရမှန်း မသိ . . လိင်ကိစ္စ နဲ့ အတိမ်အနက် .. ကြိုးတွေ ကို ကျွန်တော် ကိုတိုင် မမြင်နိုင်သေးဘူး ..
“ ချစ်ခြင်း ရောတဲ့ လိင်ကိစ္စ က တော့ ပိုကောင်းမှာပါလို့ “ ပြောမိလိုက်တယ် ..
သူမ က ပြန်မေးတယ် . . .
“ လိင်ကိစ္စ ကို မာယာ တွေ မြူဆွယ်မှု တွေ နဲ့ ချည်နှောင်ထားလို့ ရလား “
“ မာယာတွေ မြူဆွယ်မှုတွေ ထက် .. အနုပညာဆန်တဲ့ ကကြိုးတွေ နဲ့ တွဲဖက်ညီ ကကွက်တွေ က ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ် “
သူမ မျက်ရည်တွေ ကျ လာ တယ် . . .
“ သက် . . သက် ရင်ဘတ်ထဲ က အချစ်တွေ နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့သူ တစ်ယောက် ပြန်ပေါ်လာမှာပါ . . ဒါမှမဟုတ် .. တစ်နေ့ သူ သက်ဆီ ပြန်လာချင်လာမှာ ပေါ့ လို့ “ နှစ်သိမ့်လိုက်တယ် ..
“ ဟင့် .. အင်း . . သက် အကုန်ပေးပြီးသွားပြီ .. ဘာ တစ်ခု မှ မကျန်တော့ဘူး . .
သူ အတွက် သက်ဆီမှာ ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး “
နက်ဖြန် ဆို သက် . . အသစ်က ပြန်စ မှာ . .
ကျွန်တော့် သူမ နားတိုးပြီး .. ပခုံးလေး ကို ဖက်ထားလိုက်တယ် .. နောက် ဆံပင်လေးတွေ ကို သပ်ပေးနေမိတယ် ..
အကျီင်္ဗလာ ဖြစ်နေတဲ့ .. ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ထိတွေ့မှုကနေ .. တိုးတိတ်ညင်သာစွာ . . နူးညံ့မှုက စီးဆင်းနေတယ် .
သူမ မျက်ရည်တွေ ကို သုတ်ပေးမိတယ် ..
“ သက် . . မငိုပါ နဲ့ . . အချစ် ကို ရှုံးပြီးပေမယ့် . . မျက်ရည်တွေ ထပ်မရှုံး စေချင်ဘူး ..“
သူမ မျက်ရည်မျက်လုံး တွေ နဲ့ ကျွန်တော့် ကို မော့ကြည့်တယ် . .
ပြီးတော့ ပါးချင်းကပ်ပြီး .. တိုးတိုးလေး ပြောတယ် . . .
“ ကိုကို . . “ သူမ အသံတွေ တုန်ရင်နေတယ် . .
ပြီးတော့ ကျွန်တော့ နှုတ်ခမ်းလေး ဆီ သို့ သူမ နှုတ်ခမ်းလေး တိုးကပ်လာတယ် ..
အပူငွေ့လှိုင်းတွေ က ရင် ကို နွေးစေတာလား .. ခုန် စေတာ လား မသိ .. မရည်ရွယ်ပဲ သူမ ကို ပြန်နမ်းမိ တယ် .. အနမ်း နှစ်ခု ရဲ့ စီးကူးမှု က တိမ်လိုမြင့်သွားလိုက် .. တိမ်လိုနိမ့်ဆင်းလိုက် . . .
ကျွန်တော့် အသိတွေ ပူးကပ်လာချိန်မှာ သူမ ထံမှ ပြန်ခွာ လိုက်တယ် . .
ပြီးတော့ “ သက် . . . ကိုကို့ ကို ဘယ်ယောက် ယုံ လို့လဲ . . ကိုကို့မှာ ရောဂါ တစ်ခုခု ရှိနေမယ်လို့ သက် မတွေးမိဘူးလား “
“ အချစ်တွေ လိင်ကိစ္စ တွေ ကို တစ်နေ့နေ့ ကျရင် ရှင်းပြ သင်ပေးမှာ ပေါ့ . . အချိန်တွေ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် .. “
“ သက် နားလိုက်တော့နော် . . . “ သူမ ကို တိုးဖက်ထားလိုက်တယ် ..
နာရီသံ ချက်ချက် က လွဲ၍ နှလုံးခုန်သံ နှစ်ခုပဲ ပြန်ကြားနေရတယ် ..
နောက် တိတ်ဆိတ်မှုကို ကျွန်တော် ကပဲ ဖြိုခွင်းလိုက်တယ် ..
“ သက် အရမ်းမောပန်းနေပြီ .. “
“ သက် သွားအိပ်တော့ . . လွမ်း . . စောင့်နေလိမ့်မယ် .. ကျန်တာတွေ ကိုကို သိမ်းလိုက်မယ် .. “
( ကျွန်တော် တိမ်းရှောင်မှု က သူမ ကိုလည်း မနာစေကျင်ဘူး .. တိုးဝင်လိုက်ဖို့ကလည်း လုံလောက်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခု ဖြစ်မနေခဲ့ဘူးလေ )
တစ်နေ့ တော့ သက် ကို ပြောပြ နိုင်ဖို့တော့ .. တွေးမိခဲ့တယ် .. သူမ နဲ့ တစ်ယောက်ချင်း ပြန်တွေ့ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့တယ် …
“ ကိုကို အိပ်ပုတ် ထတော့ “
အသံတွေ ခေါ်သံတွေ ရော အခန်း တံခါး ထုသံတွေ နဲ့ ဆူညံ့နေတယ် ..
“ မနက်စာ သွားစားမယ် ကိုကို …“
မနက်ခင်းဟာ သူမ တို့ အသံတွေ နဲ့ နိုးထ လာခဲ့တယ်။
မနက်စာ စားဖို့ သူမ တို့ နှစ်ယောက် နဲ့ အတူ Friend လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ကို သုံးယောက်သား တူတူ လာခဲ့ကြတယ် ။
“ ကိုကို ဘာမှာ မလဲ တဲ့ ၊ ကိုကို စားချင်တာမှာ နော်တဲ့ “
“ တစ်ကယ် မှာ ရမှာလား “
“ ဒါပေမယ့် ကိုကို ကြိုက်တဲ့ မန်းမြို့တော် ပေါက်စီ ကတော့ ရလောက်ဘူးနော် “
“ ရပါတယ် ၊ ဒါဆိုလည်း ရှိတာလေး ပေါ့ “
ပေါ့ဆိမ့် နဲ့ ပလာတာ တစ်ပွဲ လို့ မှာ လိုက်ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာကတော့
“ စားချင်တာ ည တုန်းက ပေါက်စီ ဆိုတာ သူမ မသိလိုက်ဘူး “
သူမ တို့ နှစ်ယောက် ကို ကြည့်လိုက်မိတော့ ပုံမှန်ပါပဲ ဝတ်ထားတာတွေ က
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် မျက်လုံးထဲမှာတော့ 3D ကြည့်နေရသလိုပဲ . .
ည က ဘရာ နဲ့ ပုံ ကို မြင်လိုက် .. အခု ပုံမှန် ဝတ်စုံပြည့် ကို မြင်လိုက် နဲ့
စိတ်များ ပြောပါတယ် . . လူ လည် ကြ နေပုံ များ . .
နောက် သက် က လှမ်းပြောတယ် . .
“ ကိုကို . . ည က တောင်းပန် တယ်နော် နဲ့ “
“ ကိုကို အခန်း ကို လာဖွ မိတယ် . . . ကိုကို စိတ်ရှုပ်သွားသလား မသိဘူးတဲ့ “
“ ရပါတယ် .. သက် . . ၊ ကိုကို က သက် တို့ ကို ပဲ အားနာတာပါ .. သက် တို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေး နေ ရမှာ ကို .. ကိုကို က ည က ရောက်လာမိတယ် “
လွမ်းဝေ က ဝင်ပြောတယ် ။
“ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် တောင်းပန် မနေပါ နဲ့ ၊ အချင်းချင်းတွေပဲ .. အားနာစရာ မလိုဘူး “
ဒီလိုနဲ့ ဒီနက်ခင်း က နေရောင်တွေ လှ ပ သာယာ ဖူးပွင့် လှတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ လှပ မှုတွေ က နောက် ထပ် နှစ်ပတ် တောင် မခံ လိုက်ပါဘူး ။
. . . * *** . . . .
သက် ပြောခဲ့တဲ့ စကား ကို ကျွန်တော် ပြန်ပြောနေရတယ် ။
“ မီ ၊ အဲဒီ ည အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် “
“ တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုတာ က မဟုတ်ဘူး လို့ မငြင်းဘူးပေါ့နော် “
“ ကိုယ် ငြင်းလဲ ရှင်းပြလည်း မီ ၊ ယုံ မှာလား “
“ မီ . . ယုံကြည်ချင်တယ် ကိုကို . . ဒါပေမယ့် . . မီ ဆက် မတွေးချင်ဘူး .. ဒီ ပုံရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဘာ ထပ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကိုပေါ့ ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ လည်း မမေးချင်ဘူး ။ မီ အတွေးလေးနဲ့ပဲ ဆက်လျှောက်ချင်တယ် “
မီ လက်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံလေး က အခြားပုံမဟုတ်ဘူး ။ သက် ကြေကွဲတဲ့ညက အကျီဗလာ ၊ ဘရာ လေး နဲ့ သက် ကို Kissing ဆွဲ နေတဲ့ပုံ ၊
အဲဒီ ပုံကိုတွေ့ တော့ ဓါတ်ပုံ ဆရာ က လွမ်းဝေ က လွဲ လို့ ဘယ်သူမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ။
လွမ်း ဝေ နဲ့ တွေ့မှ မေးရတော့မယ် ။ အခုတော့ ရ သလောက် ချော့ ရုံ ပေါ့ ။
“ မီ ၊ အဲဒါ လွမ်းဝေ သူငယ်ချင်း . .ပါ ။ မယုံရင် လွမ်းဝေ ကို မေးကြည့် “
“ မေးစရာ မလိုဘူး ကိုကို ၊ ဒီ ပုံ ကို လွမ်းဝေ က Viber ကနေ ပို့ခဲ့တာ “
နောက် .. မီ က တစ်ခွန်းပဲ ပြောတယ် ..“ ကိုကို ရက်စက်တယ် “
ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ကို တိုးဖက် ပြီး .. နှုတ်ခမ်း ကို ဆွဲယူ နမ်း တယ် ။
ကျွန်တော့် အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်တော့ သန်းလာပီ လို့ ထင်မိတယ် ။
အနမ်း တို့မှာ ပြန်လည် စီးမျှောမိတယ် ။ မီ အနမ်း အဲလောက် တစ်ခါမှ မဆွဲဆောင်ဘူး ထင်တယ် ။
နှုတ်ခမ်းတို့ မလွတ်တမ်း နမ်း နေချိန်မှာ ပါးပြင်မှာ ပူနွေးစွတ်စိုမှု ကိုခံစားရတယ် ။
မီ . . ငို နေတယ် ။ မီ . . ငို နေတာ လား ။ မငို ပါနဲ့ မီ ရယ် ။ ရင်ဘတ်ထဲ က အသံတွေ ။
နောက် မီ က ကျွန်တော့်ကို တွန်းထုတ်လိုက်တယ် ။
ကိုကို . . . မီ ကို မေ့ လိုက်တော့ ။ မီ က ဘယ်တော့မှ မီ နမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ကြားထဲမှာ အခြားသူ ဝင်နမ်း သွားတဲ့ နှုတ်ခမ်း ကို မလိုချင်ဘူး ။ မီ အတ္တကြီးတယ် ပြောမလား ။ မီ ပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် လည်း အပြည့်ပဲ ပိုင်ချင်တယ် ။ မီ တစ်ခုခု စားတုန်း သူငယ်ချင်း က မြည်းကြည့်မယ် ဆိုရင် တောင် . . အဲဒီ မုန့် ကို သူငယ်ချင်း ကိုပဲ ပေး လိုက်တယ် ။ မုန့်တောင် မဝေ စား နိုင်တာ .. အချစ် ဆို .. အဝေးကြီး ။
“ ကိုကို . . . မီ နှုတ်ဆက်ပါတယ် “
နောက်ဆုံး အနမ်း က ရင်ဘတ် ကို လောင်ကျွမ်းစေတယ် ။
ဆောက်တည်ရာ မရ ။ အချစ် က ထားခဲ့ပြီတဲ့ ။
နေ့တွေသာ ဖြတ်သန်းသွားတယ် . . ယောင်ချာချာ နဲ့ ..
“ ကိုကို . . ကော်ဖီ သောက်မလား “
ပန်းဝေ အသံကြားမှ လှည့်ကြည့်မိတယ် ။
“ ကိုကို .. အခု တစ်လော အခန်းအောင်း နေသလိုပဲ ၊ မမ မီ ရော . . “
“ ပန်းဝေ က မသိသေးဘူး ထင်တယ် ၊ မီ နဲ့ ကိုကို လမ်းခွဲ လိုက်ပီ “
“ ဆောရီး .. ပန်းဝေ မသိလို့ လို့ မေးမိတာပါ “
မေးလိုက်မှပဲ . . မီ ကို လွမ်း သလိုလို . . လွမ်း ကို စိတ်တိုမိသလိုလို . .
“ လွမ်း .. ကိုကို က မမ မီ နဲ့ လမ်းခွဲ လိုက်ပြီဆို “
“ အင်း ၊ ဟုတ်တယ်လေ ။ “
“ ဒါဆို . . ကိုကို သနားပါတယ် ၊ အခု တစ်လော အခန်းအောင်းပြီး ငြိမ်နေတယ် “
“ သိပါတယ် .. နင် သနား တယ် ဆိုတာ ထက် ကိုကို ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ် မဟုတ်လား .. ပန်း “
“ ဟာ . . မဟုတ်ပါဘူး “
“ ဘာ မဟုတ်တာလည်း . . ငါ သိနေတယ် . . နင် ကိုကို ဟာ မြင်လိုက် ကတည်း က စိတ်ဝင်စားနေတာ မဟုတ်လား “
“ နင် နဲ့ ဆိုရင်တော့ ငါ ကိုကို နဲ့ သဘောတူတယ် ၊ နင် လည်း ကိုကို့ ကို ချစ်နေတယ် မဟုတ်လား “
“ ကိုကို . . က ငါ့ ကို မချစ်ပါဘူးဟာ .. သူ့ မမ မီ ကိုပဲ လွမ်းနေတာ “
“ အဲဒါ ငါ့ တာဝန်ထား ၊ နင့် ကို ကိုကို က . . ချစ်လို့ပါ ပန်းရယ် ၊ တူတူ အိပ်ရအောင်တွေ ၊ ပန်း ကို လိုးချင်တယ် တွေ လာ ပြောရင် နင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ “
“ လွမ်း . . နင် မညစ်ပတ် နဲ့ ၊ ငါ့ ကိုကို က အဲလို မပြောဘူး “
“ ဟုတ်ပါ ပီ .. မပြောပါဘူးထား ၊ ပြော လာ ရင် ပြောတာ .. နင် ခံမှာ လား ဟင် “
အတွေးမှာတောင် ရှက် နေခဲ့တယ် . . ကိုကို ဟာ ကို မျက်လုံးထဲ ပြန်မြင်လာခဲ့တယ် ။ ကိုကို ဟာ နဲ့ လာ လုပ်ရင် … ဟင့် အင်း … သိတော့ဘူး …
“ ဟာ .. တော်ပီ လွမ်း … ငါ အိပ်တော့မယ် “
“ သိနေတယ် .. အိမ်မက်ထဲ ကိုကို့ ကို ခေါ်မသွား နဲ့ နော် .. ငါ့ အိမ်မက် ထဲ လည်း တစ်ဝက် ပိုင်သေးတယ်“
“ ဒါနဲ့ . . ကိုကို ဟာ က မိုက်လား ၊ ဘယ်လောက် ရှိလဲ “
“ ဟာ . . မသိဘူး … ဟိ .. ဇတ်ကားတွေ ထဲ က လောက်တော့ ချိဘူး .. ဒါပေမယ့် အစ ကတော့ ဒီ အတိုင်းလေးပဲ .. ငါ ကြည့်နေရင်း မှ တုတ်ပြီး ထောင် လာ တာ .. ပြီးတော့ ငါ့ ကို လက်ညိုးထိုးနေသလိုပဲ . . သိလား .. “
ည ရဲ့ လ တောင် သူ့ မျက်နှာ ကို တိမ်တွေကြားမှာ တိုးဝှက် ဖို့ ကြိုးစားနေသလိုပဲ ။
ဘာ ပဲ ပြောပြော . . . အချစ် သည် မှန်းဆ ရ သိပ်ခက်သည်။
“ ကိုကို . . လွမ်း တို့ လည်း နောက် တစ်ပတ် ဆို ကျောင်းပိတ်တော့မယ်နော် “
“ ကိုကို ဒီ တစ်ပတ် စနေ အားလား “
“ ဘာလို့လည်း လွမ်းဝေ “
“ ပန်းဝေ ကို မေမြို့ လိုက်ပို့ပေးပါလား ၊ သူ့ တီချယ် ဆီ သွား မလို့ .. လွမ်း မအားလို့လေ “
“ အင်း၊ ရပါတယ် “
ပြင်ဦးလွင် တက်တော့ . . ပန်းဝေ က ဆိုင်ကယ် နောက် ကနေ ငြိမ်ငြိမ်လေး လိုက်လာခဲ့တယ်။
“ ပန်း . . အတက် အကွေ့တွေ ကျ ရင် . . ခါး ဖက် ထားလေ ၊ ဒါမှမဟုတ် အကျီ ကိုင်ထားပေါ့ “
ပန်းဝေ က စကဒ် အတိုလေး ၊ အင်္ကျီက ဘလောက်စ် လေး နဲ့ သိပ်ချစ်စရာ ကောင်းနေတယ်။
“ ပန်း . . ကောင်လေး မရှိဘူးလား “
“ ဟင့်အင်း ၊ ရှိဘူး “
“ မယုံပါဘူး ၊ ဒီ အရွယ်မှ အမြီး မပေါက်ရင်တော့ ဟုတ်သေးဘူး “
“ အတည်ပြောတာ ရှိဘူး “
“ ဒါဆို ပန်း ကြိုက်တဲ့ ကောင်လေး တွေ ရော မရှိဘူးလား “
“ ဒါကတော့ မပြောပြဘူး ၊ အသေသတ် ပဲ “
အပိုင်း ( )
ပန်းဝေ သူ့ ဆရာမ ဆီ က အပြန် . . မှာတော့
“ ပန်း မျက်နှာ မကောင်းပါဘူး “
“ ဆရာမ ဆီ လာတဲ့ ကိစ္စ က အဆင်မပြေဖူး ၊ မနက် ဖြန် ပြန်လာရမယ်တဲ့ “
“ ဒါများ ပန်းရယ် .. နောက် တစ်ခေါက် ပြန်တက်လာတာပေါ့ “
“ ကိုကို ပင်ပန်းတာပေါ့ “
“ ရပါတယ် ၊ ပန်းဝေ က ဘယ်လို စီစဉ်ချင်လို့လည်း ၊ ဆရာမဆီ အိပ်မလား “
“ ဟင့်အင်း ၊ ဟိုတယ် တစ်ခုခု မှာပဲ အိပ်လိုက်တော့မယ်လေ “
“ ကိုကို က ရော အဆင်ပြေ လား “
“ ကိုကို က တော့ အဆင်ပြေပါတယ် “
ဟိုတယ် ရောက် ပြီး .. အခန်း ယူတော့ . .
“ တစ်ယောက်ခန်း (၂ ) ခန်း ပေးပါ “
“ အစ်ကို .. တစ်ယောက်ခန်း မရှိဘူး ၊ နှစ်ယောက်ခန်း တွေပဲ ရှိတယ် “
“ ဘယ်လို လုပ်မလဲ ပန်းဝေ ၊ ဟိုတယ် ထပ်ရှာမလား “
“ ကိုကို အဆင်ပြေလား ၊ ပန်းဝေ ကို အားမနာ နဲ့ ရပါတယ် “
ဒီလို နဲ့ ပန်းဝေ နဲ့ နှစ်ယောက်တူတူ တစ်ခန်းထဲ . .. ယူဖြစ်လိုက်တယ် ။
ညနေ စာ စာပြီး အပြန် ဟော်တယ် ရောက်တော့ . . ပန်းဝေ ကိုလည်း အားနာ တာ ပါတယ် ။
စိတ်ထဲ လည်း နည်းနည်း မွန်းကြပ်သလို ရှိတာ နဲ့ . . ဝရံတာ မှာ ထိုင်ပြီး ဆေး လိပ် သောက်နေမိတယ် ။
ထိုင်နေရင်း စဉ်းစားမိတာ က . . နှစ်ယောက်လုံး အကျီ အပို မပါလာဘူး ။ မနက် သူ့ ဆရာမ ဆီ ပြန်သွားရင်
သူ့မ ကတော့ ပြဿနာပဲ ။ ကျွန်တော် ကတော့ တီရှပ် ရယ် ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ အရှည် နဲ့ ဆိုတော့ ည အိပ်ရင်
လည်း ပြဿနာ မရှိ ။ သူမ ကတော့ ဘယ်လို လုပ်မလဲ မသိ ။
“ တီ . . တီ . . တီ “
ဖုန်း မြည်သံ နည်းနည်းကြာ သည် အထိ ကိုင်မယ့်သူ မရှိတာကြောင့် အထဲ ဝင် ကြည့်မိတော့ . .
ပန်းဝေ က ရေချိုးခန်းထဲမှာ ။ အတွေးတွေ ပြာယာခတ်နေတယ် ။
ဖုန်း ကိုင် လိုက်တော့ “ ဟယ်လို . . “
“ ကိုကို လား “ . . ဖုန်း ထူး ပဲ ထူး လိုက်ရသေးတယ် .. ကိုကိုလား တဲ့ .. ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာ တွေးနေတုန်း ..
“ လွမ်းဝေ ပါ .. ပန်းဝေ ရော ကိုကို “
“ ရေချိုးခန်းထဲမှာ . . ဘာမှာ မလို့လဲ .. နောက် ပြန် ဆက်လိုက်လေ “
“ ဟာ . အရေးကြီး .. အခု ပြောချင်နေတာ ..“
“ ပန်းဝေ ဆီ ဖုန်း ပေး .. ပေးပါ “
“ အေးအေး . . “
“ ပန်းဝေ .. လွမ်းဝေ ဆီ က ဖုန်း “
“ ဟာ .. တံခါး ဖွင့်လို့ မရဘူးလေ ကိုကို .. ပန်း ဝေ ရေချိုးတုန်း . . ဆပ်ပြာတွေ နဲ့ “
“ ဒါဆို လက်ပဲ ထွက်ခဲ့ ကိုကို ပေးမယ် “
တံခါးခြား က လက် ကလေးဆီ ကို ဖုန်း ပေး လိုက် ပေမယ့် .. အတွေးတွေ က လက်ကလေး က တဆင့် . ..
သို့ပေမယ့် . . အတွေးတွေ မြိုသိပ်ကာ .. ဝရံတာ ဆီသို့ နောက် တဖန် ပေါ့ . .
“ ကိုကို . . ပျင်းနေပီလား “
လှည့် ကြည့်မလိုက်တော့ . . ပန်းဝေ က ကျွန်တော့်ဘေးမှာ . .
အရာရာ အံ့သြမှု ။ ။
ပန်းဝေ ကိုယ်ပေါ်မှာ ရေချိုး တဘက် ကြီး ပဲ ပတ်ထားတယ် . . အပေါ်မလုံ အောက်မလုံ ( လုံလောက်အောင် မလုံတာပါ )
“ ဟာ . . ကိုကို . . တော်ပီလေ ဒီလောက်ကြည့်တာ “
“ အကျီ မပါလာလို့ . .လေ .. အဲလို ကြည့်နေရင်တော့ .. အကျီ သွားဝယ်တော့မယ် ကိုကို . . လိုက်ပို့ “
“ ဟာ .. ဆောရီး ညီမလေး . . မဟုတ်ဘူး .. လွမ်းဝေ ဆိုရင် အံ့သြမှာ မဟုတ်ဘူး “
“ ပန်းဝေ ဖြစ်နေလို့လေ . . “
“ ဟာ .. တော်ပီ .. အခန်းထဲ ဝင်တော့မယ် .. “
သူမ လှည့်ပြီး အခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားပေမယ့် ကျွန်တော် ဝရံတာ မှာပဲ ဆက် ကျန် ဖြစ်ခဲ့တယ် ။
“ တီ . . တူ . . တီ “
ဖုန်း မြည်လာတာ နဲ့ ကိုင်လိုက်တော့ . . လွမ်းဝေ
“ ကိုကို . . ဘာ လုပ်နေတာလဲ “
“ ဝရံတာ မှာ ထိုင်နေတာ “
“ သိတယ်လေ . . . ပန်းဝေ ပြောတယ် “
“ ကိုကို . . ပန်းဝေ ကို ချစ်တယ် မလား “
“ အွန် . လန့် ထှာ . . ဘာမှ လဲ ဆိုင်ဘူး .. “
“ ကိုကို . . ဘယ်လိုလည်း . . တဘတ်လေးပဲ ပတ်ထားတဲ့ ပန်းဝေ မလှဘူးလား “
ဟာ . . လွမ်းဝေ . . ဘယ်လိုသိတာလဲ . . ပန်းဝေ ပြန်ပြောတာလား . .တွေးနေတုန်း
“ ကိုကို . . ကိုကို့ ဟာ ကိုလည်း . . ပန်းဝေ မြင်ဖူးတာ .. လွမ်း သိတယ်နော် “
အင့် . . နင် သွား သလိုပဲ . . လုပ်ချ လိုက်ပြန်ပီ ။
“ အခု လည်း ပန်းဝေ သူ့ ဆရာမ ဆီ လာတာ မဟုတ်ဘူး .. အားလုံး လွမ်းဝေ စီစဉ်ပေးလိုက်တာ ..
ပန်းဝေ တို့ ကျောင်းပိတ်တော့မှာ . . ကိုကို . . အခု ချိန် ပန်းဝေ အချစ် ကို ရအောင် မယူရင် တော့ ..
လွမ်း လည်း မတတ်နိုင်တော့ဘူးနော် . . ကိုကို နဲ့ ဆို ပန်းဝေ ကို သဘောတူတယ် “
အခု မှပဲ အရာ အားလုံး သဘော ပေါက်တော့မယ် . .
ပန်းဝေ . . သတ္တိရှိလာ သလိုပဲ ထင်နေတာ .. နောက် ကွယ်မှာ ဆြာမ ကြီး ရှိနေတာကိုး ..
ဘာလုပ်မလဲ . . ရှေ့တိုးမလား .. လှည့်ပြန်မလား . .
ချစ်သလိုတော့ ရှိပေမယ့် .. အချစ်က မသေချာ . .
ဒီနေရာမှာ လွမ်းဝေ ဆိုရင် တော့ ဒီလောက် တွေဝေ လိမ့်မယ် မထင် . . .
ဒီ အချိန် အခန်းထဲ ပြန်ဝင် ဖို့ ကတော့ စိတ် က မဖြူစင်တော့ဘူး . .
ဒီ အတိုင်း ကိုယ့် အိပ်ရာ ကိုယ်သွားတာ တောင် စိတ်က မလုံခြုံ . .
မိလွမ်း ပန်းဝေ နဲ့ ဘာ တွေ ထပ် ညွှန်ကြားထားလဲ မသိ . .
စိတ် မလုံခြုံ မှု ကို ပြန်တွေးနေမိတယ် ။ ကျွန်တော် ပန်းဝေ ကို ချစ်ရော ချစ်ရဲ့လား ။
ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို အလွယ်သုံးသင့်သလား ။ ချစ်တယ် လို့ ပြောတာ လိင်ကိစ္စ ဆီ သို့ ရည်ညွှန်းနေသလား ။ ဒီနေရာမှာ ပန်းဝေ မဟုတ်ပဲ လွမ်းဝေ ဆိုရင်ရော . .
လိင်ကိစ္စ ကိုပဲ ရည်ညွှန်းမိမှာလား ။ ကျွန်တော် အတွက် လိင်ကိစ္စ က ဘယ်လောက် ရာနှုန်းလဲ ..
ဒီ အတွေးတွေ က ဘာကြောင့် ဝင် လာတာ လဲ . .
သို့ပေမယ့် ခြေလှမ်းတွေ က ပန်းဝေ ရှိရာသို့ . . .
ပန်းဝေ ကို လှမ်းကြည့် လိုက်တော့ စောင်လေးခြုံလို့ တစောင်းလေး ကျောပေးနေတယ် ။
အိပ် နေတာလား .. သို့ ကျွန်တော် ဝင်လာသော ခြေသံတွေကိုပဲ နားစွင့်နေတာလား ။
သူမ လည်း ရင်ခုန်နေမလား .. သို့ မဟုတ် .. မျှော်လင့်နေမလား . . သို့မဟုတ် ..
ကျွန်တော် ချစ်တယ် လို့ပြောလာချိန် အတွက် အဖြေ က အသင့်ဖြစ်နေမလား။
သို့မဟုတ် .. ကျွန်တော် တစ်ဆင့်တက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်နေမလား ။
သူမ မည်သို့တွေးနေမည် မသိ . .
ကျွန်တော် စိတ်တွေ ကတော့ ဘယ်ဘက် ကို ပြေးသွားလိုက် .. ညာ ဘက် ကို ပြေးသွား လိုက် နဲ့ ..
စိတ်က ပြေးနေရင်း နဲ့ ခြေလှမ်းတွေ က သူမ ကုတင်ဘေး ဆီမှာ ရပ်နေတယ် ။
မျက်နှာ ကို တိုးရင်း ငုံးပြီး သူမ ပါးပြင် ကို နမ်း လိုက်မိတယ် ။
သူမ ခေါင်းကလေး လှည့်ပြီး ကျွန်တော့် မျက်လုံး တွေ ဆီ ကြည့်တယ် . .
သူမ နှုတ်ခမ်းတွေ က အနား တိုး လာပေမယ့် သူမ အကြည့်တွေ က ကျွန်တော့ မျက်ဝန်းတွေ ထဲ အဖြေရှာနေသလိုပဲ ။ ဒါပေမယ့် နှုတ်ခမ်းချင်း ထိမိ . . အနမ်းတွေ ဖူးပွင့်လာတယ် ။
ကျွန်တော့် လက်တွေ က သူမ ပုခုံး ဆီ မှ တစ်ဆင့် စီးဆင်းသွားတယ် ။ လက်တစ်ဖက် က ဖက်လိုက်ချိန် .. နောက် လက်တစ်ဖက် က သူမ စောင်တွေ အောက်မှာ ဖုံးထားတဲ့ ချိုချို ဆီ သို့ ..
စမ်းမိတော့ . . စောင်အောက်မှာ တဘက် လေး က လဲ ဖရိုဖရဲ .. ဖောင်း အိနေတဲ့ နို့ ကလေး က . . ရင် ကို လိုက်ဖို လာ တယ် ..
နှုတ်ခမ်း ချင်း နမ်းရာ ကနေ လည်ပင်း .. လည်ပင်း က နေ နို့ ဆီ သို့ ရွှေ့လိုက်တယ် .
သူမ က လည်း မျက်လုံးလေး မှိတ်ထားတယ် .. ရှက်ရွံနေမှုလား . . ချစ်ခြင်း ရဲ့ စေခိုင်းရာ နာခံ နေတာ လား မသိ . .
“ အား . . အင်း . . ညည်း တွား သံ အချို့ တိုးတိုးလေး လွင့်ပျံလာတယ် “
ကျွန်တော်လည်း နှစ်ဖက်လုံး တိုး စုပ် လိုက်တယ် ။
နောက် စုပ် ဆွဲ နေ ချိန် မှာ ပဲ လက် ကလေး က သူမ ပိပိ ဆီသို့ရွှေ့လျား ..
ပေါင် အတွင်းသား တစ်လျှောက် .. ဖြည်းညင်းတိုးတိတ်စွာ ပွတ်ပြေးနေရင်း . . ပိပိ ဆီသို့ တစ်ချက်ချက် ခလုတ် ဝင်တိုက်လိုက်တယ် ..
ညည်းတွားသံလေး နဲ့ အတူ သူမ ခန္တာကိုယ် ပါ စည်းချက်ညီ တွန့် ကွေး လာတယ် ။
နောက် ကျွန်တော် အကျီ င်္ရော ဘောင်းဘီ ပါ ချွတ်လိုက်တော့တာပေါ့ ။
စောင် ဖယ်လိုက်ချိန်မှာ ဖရိုဖရဲ တဘက် အောက် က အလုံးစုံ က ငေး မော စရာ တွေပါပဲ ။
အဲလောက် မမျှော်လင့် ထားပေမယ့် . . အရာရာ ဟာ ချစ်ခင်စရာ အပြည့် ။
ပိုချစ်သွားတော့ . . ပို ဆွဲ ရတော့မှာ ပေါ့ ( အတွေးပြောပါတယ် )
နောက် သူမ အပေါ် တက်ပီး..
ကျွန်တော့် လီး ကို သူမ ပိပိ ဆီသို့ ထောက် လိုက် ချိန်မှာ ..
သူမ ကြောက်ရွံ့ မှု မဟုတ်ပေမယ့် တုန်ခါမှုတော့ ခံစားလိုက်ရတယ် ။
နောက် ဖြည်းဖြည်း ချင်း ထိုးသွင်း ယူ လိုက်တယ် ။
အစ မှ တော့ သူမ နာကျင်သံတွေ ထွက်လာ ပေမယ် . .
နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ရင်း . . အသံတွေ ပြောင်းလာခဲ့တယ် ..
“ အား . . အင်း . . အင်း . .“
ကျွန်တော်လည်း .. အချက် ပေါင်းများမှာ အသွင်းအ ထုတ် လုပ်လိုက်တယ် . .
နူးညံ့ သော အသွင်းအထုတ် က နေ . .
စီးဆင်းမှု ကောင်းလာ ချိန်မှာတော့ မြန်နှုန်း တိုး လာတယ် ဆိုပေမယ့် . .
သူမ နာကျင်ခံစားရမှာ မလိုလားမှု ကြောင့် အသာအယာ နဲ့ ပဲ
အထွတ်အထိပ်ဆီသို့ . .
ပြီး ဆုံးသွားချိန်မှာတော့ . . သူမ ကို တိုး ဖက်ထားမိတယ် . .
“ သူမ က တိုးတိုးလေး လှမ်း ပြောတယ် ..
ကိုကို့ ကို ချစ်တယ် တဲ့ “
ဟာ .. ဟုတ်သားပဲ .. ကျွန်တော် သူမ ကို ချစ်တယ် မပြောမိသေးဘူး .. ချစ်တယ် ဆိုတာရော သေချာ လားလို့ ပြန်မဆန်းစစ် မိသေးခင် .. သူမ စကား ကို ကြားလိုက်ရတော့ ..
“ အင်း .. ကိုကို လည်း ပန်းဝေ ကို ချစ်ပါတယ် “
“ ဒါပေမယ့် ပန်းဝေ အရင်ပြောနော် . . “
သူမ ဆံပင်လေး တွေ ကို လက်ကလေး နဲ့ တိုးဖွ နေမိသည် ။
“ ကိုကို့ကို ချစ် တတ်အောင် မသင်ပါ နဲ့ လား .. ကလေး ရယ် “
အရောင်တို့ သည် ဝါပြာလဲ့ နေသည် ။ မြင်မြင်ရာရာသည်လည်း .. ဖြူ ဖျော့ နေသည် ။
အချိန်တွေ သည်လည်း ကုန်မြန်ခဲ့သည် ။ မန်းတလေး ကို အလုပ် နဲ့ ခန ပြန်ရောက်လို့
Friend Tea Shop မှာ ထိုင်နေတုန်း လွမ်း နဲ့ တွေ့ တော့ . .
“ လွမ်း . . မိတ်ဆက်ပေးရအုံးမယ် .. ဒါ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးလေ .. နာမည် က ပန်းဝေဝေ တဲ့“
“ ချစ် .. သာ လွမ်း နဲ့ ပန်း ဆိုတဲ့ အမွှာ ထဲ က တစ်ယောက်ပေါ့.. “
“ ဟာ . . ဒါဆို ပန်းဝေ နဲ့ နာမည် ဆင်တာပေါ့ .. မမ က ချစ်စရာကောင်းတယ်နော် . .“
“ လွမ်း .. ပန်းဝေ ရော . . “
“ နယ် မှာ ကျောင်း ဆရာမ လုပ်နေတယ် “
“ အိမ်ထောင် မကျသေးဘူး ကိုကို . . “
“ လွမ်း .. ရောက်ဖြစ်သေးလား .. 35 လမ်း ဘက် ကို .. “
“ မရောက်ဖြစ်ဘူး .. “
“ ကိုကို တောင် အခုပဲ ပြန်လာတာ .. “
ကဲ .. သွားတော့မယ် .. လွမ်း .. နောက် အဆင်ပြေရင် ပြန်တွေ့တာ ပေါ့ ..
ပန်း ကို လည်း သတိရ ပါတယ် လို့ …
မန်းလေး နေ သည် ပူပြင်း လှသည် ။ အလွမ်းတွေ သည် လည်း . .ရင် ထဲ .. ထိခိုက်လှ သည် ။
အရာရာသည် လှည်ပတ် နေပေမယ့် . . အလွမ်းတွေ သည် .. မေ့ ပျောက်ဖို့ မလွယ် .. အချစ် အဖြစ် ပြောင်းလဲ ရောက်ရှိဖို့ ရာ .. မဖြစ်နိုင်တော့ ..
လွမ်း လိမ့်မည် လို့တော့ မမျှော်လင့် ခဲ့ပေမယ် . .
အလွမ်း တို့ သည် နှစ်ပေါင်း များစွာ ပါလာခဲ့မှာတော့ သေချာ နေသည် ။
ဘယ်တော့ မှ အလွမ်း အတွက် နှလုံးသား မှာ နေရာပေးရ လိမ့်မယ်လို့ မတွေးခဲ့မှု အတွက်. .
အလွမ်း ကို လွမ်း လိမ့် မည် လို့ မတွေးခဲ့မှု အတွက် . .
နှလုံးသား မှာ အရာထင်စေခဲ့သော . . ချစ်သူ အတွက် . .
သံယောဇဉ် တရား တို့ မပါသော .. ချစ်ခြင်း သက်သက် အတွက် . .
လွမ်းနေ မိ တော့ မယ် .. လွမ်းရတော့မှာပေါ့ ။
အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။